श्रीमद्भगवद्गीता - विकिपुस्तक
३ अध्यायहरू बानाउने वा सम्पादन गर्ने
४ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय एक
४.१ धृतराष्ट्र उवाच
४.२ सञ्जय उवाच
४.३ अर्जुन उवाच
४.३.१ सञ्जय उवाच
४.४ यो पनि हेर्नु होस्
५ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय दुई
५.१ सञ्जय उवाच
५.३ अर्जुन उवाच
५.४ सञ्जय उवाच
५.६ अर्जुन उवाच
५.८ अर्जुन उवाच
५.९ श्री भगवानुवाच
५.१० अर्जुन उवाच
५.११ सञ्जय उवाच
५.१२ अध्याय १८ को सार–संक्षेप
५.१३ गीता पुष्पिका र यसको भावार्थ
५.१३.१ गीताप्रेस गोरखपुर
५.१३.२ शांकरभाष्य संस्करण र रामकृष्ण मिशन संस्करण
५.१३.३ कोमल गीता
५.१४ योगदान गर्ने प्रयोगकर्ता
श्रीमद्भागवत गीताहिन्दू धर्मका पवित्रतम ग्रन्थहरूमा एक हो ।यो ऐतिहासिक हिन्दूग्रन्थ महाभारतको भीष्म पर्वबाट लिएको एक सानो ग्रन्थ हो । यसमा १८ अध्याय छन् । यसलाई मोक्षशास्त्र पनि भनिन्छ । भगवद्गीता अनुमानत आज भन्दा लगभग ५००० हजार बर्ष पहिला अर्थात कलियुगको आरम्भमा कुरुक्षेत्र नामको युद्ध भूमिमा कृष्णले गीताको उपदेश अर्जुनलाई दिएका थिए । यो संजय र धृतराष्ट्रको संवादमा प्रश्नोत्तर प्रकारले लेखिएको छ यसमा १८ अध्याय छन् भने ७०० सौ पद्यात्मक संस्कृतश्लोक छन् । यसमा अनुष्टुप छन्दको अधिक प्रयोग भएको छ । स्तुति आदि पद्यमा अन्य छन्दको पनि प्रयोग गरिएको छ यसको प्रथम अध्यायमा अर्जुनले खेद व्यक्त गरेको हुनाले अर्जुन विषादयोग अध्याय भनिएको छ । यस्तै प्रकारले अर्जुन र कृष्णको संवाद अनुसार अन्य अध्यायको पनि नाम राखिएको छ यसमा एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञानयोग, भक्ति योगको अध्याय क्रम अनुसार सुन्दर ढंगले चर्चा भएकोछ । यो ऐतिहासिक ग्रन्थ महाभारतको भीष्मपर्व अन्तर्गत दिइएको उपनिषद हो यसमा अनित्य देह भन्दा नित्य आत्मा को निरूपण गरिएकोछ। यसलाई मोक्ष ग्रन्थ पनि भनिएको छ ।
विकिपिडियामा श्रीमद्भगवद्गीतासँग सम्बन्धित थप जानकारी रहेको छ।
अध्यायहरू बानाउने वा सम्पादन गर्नेसम्पादन
श्रीमद्भगवद्गीता गीता महात्म्य
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता अष्ट अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता नव अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता दशौ अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदश अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दश अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदश अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता षोडश अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदश अध्याय
श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्याय
यो विकिपुस्तक संग्रह हो !
[ संग्रह खोल्ने ] [ पि.डि.एफ ] [ छापिएको पुस्तकको रुपमा अनुरोध गर्नुहोस् ] [ सहायता ]
कृष्ण अर्जुन संबाद भगवद्गीता
श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय एकसम्पादन
धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान् काशीराज, (राजा) पुरुजित, कुन्तीभोज, नरश्रेष्ठ शैव्य
हजुर, भीष्मपितामह, कर्ण, युद्धविजयी—कृ
पाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा यी हाम्रो पक्षका मुख्य मुख्य योद्धाहरु हुन् ।
हे राजन, दुवै सेनापट्टि रणसूचक शंखनाद भइसकेपछि कपिध्वज अर्जुनले कौरवलाई युद्धका निम्ति तयार देखे । अनि आफुले पनि युद्ध गर्न तयारी साथ हातमा धनु उचालेर श्रीकृष्णलाई यी कुरा <br भने—।।२०।।
यो पनि हेर्नु होस्सम्पादन
श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय दुईसम्पादन
== अध्याय १८ ==
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।।१।।
अर्जुनले भने– हे महाबाहु, हे हृषीकेश (अन्तर्यामी) , हे केशिनिसूदन (केशिनाम गरेका असुरको संहार गर्ने), मैले सन्न्यास र त्यागलाई यथार्थरुपमा पृथक् पृथक् जान्न चाहन्छु ।
अर्जुनले यस श्लोकमा तीनवटा सम्बोधन गरेका छन्, महाबाहो, हृषीकेश, र केशिनिसूदन । कुनै व्यक्तिले अर्कालाई यसरी एक साथ धेरै नामले सम्बोधन गर्नुको दुईअर्थ हुन सक्छ कि त उ सारै हडबडाएको छ कि उसमाथि असाध्य प्रेम उम्लिएर आएको छ । गीताको सुरुमा अर्जुन हडबडाएका, अनिश्चित र विषादग्रस्त थिए । तर विश्वरुपदर्शन पछि उनी केही शान्त भएका छन् । त्यसैले यी बढी सम्बोधन प्रेमका सूचक हुन् भन्न सकिन्छ । हडबडलाई समाप्त गर्ने एक मात्र आधार उनले कृष्णलाई देखेका छन् । यस कारण कृष्णमाथि ज्यादै प्रेम उत्पन्न भयो । अनि यस प्रेमवश धेरै नाम लिएका हुन् । ययस बाहेक धेरै नाम लिएर सम्बोधन गरिएको अध्याय विश्वरुप अध्याय हो । जहां कृष्णको विश्वरुप देखेर आत्तिएका थिए । अब त अर्जुन कर्म गर्न मनमनै तैयार भइसकेका छन् । तर उनलाई त्याग गर्ने कि सन्न्यास लिने ? अर्जुनलाई त्याग र सन्न्यास लाठे र लाठी जस्ता दुइ बिलकुल फरक विषय देखिएका छन् । यसमा फेरि अलमल भयो ।
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु ः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा ः ।।२।।
विद्वान्हरुले काम्यकर्मको त्यागलाई सन्न्यास ठान्दछन् र अरु विचक्षण (विचारकुशल) ले सबै कर्मको फल त्याग गर्नुलाई त्याग भन्दछन् ।
कविको अर्थ केवल गद्य वा पद्यमा कविता लेख्ने साहित्यकार होइन । गीताकालमा कविको अर्थ थियो– विश्वको ज्ञान हुने व्यक्ति । ज्ञानको विश्वकोश, विद्वान् । शास्त्रीय ज्ञानको गहिराईसम्म पुगेको । त्यसैले शुक्रलाई कवि भनिन्छ । र उनलाई अमित प्रज्ञ महायशाः भनिएको छ । स्वयं भगवान् कृष्णले आफ्ना विभूतिहरु बताउंदा आफुलाई कविनां उशना कवि भन्नु भएको छ काम्य कर्म भनेका ती कर्महरु जुन कामना पूरा गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ । यस्ता काम्य कर्मको त्यागलाई विद्वान्हरुले सन्न्यास भन्दछन् । स्वाभाविक हुने कर्म होइन । सामान्य हिंडडुल गर्नु स्वाभाविक कर्म हो तर कुनै गाडी समाउनका लागि गरिएको कर्म काम्य कर्म हो ।
सामान्य बोलीचालीमा पनि सन्न्यास र त्याग समानार्थी रुपमा प्रयोग हुन्छन् । नेपालमा दशनामी सम्प्रदायलाई सन्न्यासी भनिन्छ । उनीहरु आफुलाई शंकराचार्यका सम्प्रदायका अनुयायी र सन्न्यासीका वंशज बताउ“छन् ।
ऐतिहासिक युगका महानतम ऋषिमध्ये एक आचार्य शंकरका अनुसार, सन्न्यास दुइ प्रकारका हुन्छन– मुख्य र गौण । मुख्य सन्न्यास पनि दुइ प्रकारका हुन्छन् । एक ज्ञान लाभका लागि– विविदिषा र अर्को ज्ञान लाभ अनन्तर– विद्वत्सन्न्यास । गौण सन्न्यास तीन प्रकारको हुन्छ– सात्विक, राजस र तामस । ज्ञान लाभका लागि जुन विविदिषा सन्न्यास हो त्यो गेरुवा वस्त्रधारीका लागि विधान हो । श्रवण, मनन र निदिध्यासन यसको मुख्य साधन हो । यसमा केवल शरीर धारण गर्न जति कर्मको आवश्यकता पर्छ त्यति कर्म मात्रै गर्नु पर्छ । लोकसंग्रह आदि यसको गौण लक्ष्य हो । ज्ञानलाभ पछि स्वतः कर्मत्याग हुन गई भएको विद्वत् सन्न्यासलाई वास्तवमा सन्न्यास भनिन्छ ।
त्यसै गरी आश्रमको रुपमा पनि सन्न्यास एक अवस्था हुन्छ । प्राचीन ऋषिहरुले व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्न्यास अनिवार्य मानेका छन् । प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम अन्तर्गत व्यक्तिले गुरुको आश्रममा रहेर कठोर अनुशासन पालन गर्दै विद्याध्ययन गर्नु पर्दथ्यो । ब्रह्मचर्य समाप्त भए पछि गृहस्थ आश्रम प्रारम्भ हुन्छ । गृहस्थ आश्रमको आरम्भ २५ वर्षको उमेर पछि मानिएको छ । यस आश्रममा धर्मानुकूल उपायहरुद्वारा विवाह, जीविकोपार्जन, सन्तानको पालन, देव, पिता, अतिथि र आश्रितको यथायोग्य सत्कार गर्नु पर्छ । तेस्रो अवस्थालाई वानप्रस्थ र चौथोलाई सन्न्यास भनिएको छ । दुवै अवस्थामा शुद्धतापूर्वक जीवनयापलाई जोड दिइएको छ ।तर तेस्रो अवस्था जिम्मेवारी सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्दै नियममा बस्ने अवस्था हो भने चौथो पूर्णतया जिम्मेवारीमुक्त शुद्धता साथ जीवनयापन गर्ने अवस्था हो । यसरी जीवनका चार विभाजनलाई संक्षिप्तमा निम्न्लिखित प्रकार व्यक्त गर्न सकिन्छ –
३. ज्ञान, अनुभवको सामञ्जस्य अवस्था,
४. आत्म कल्याणको अवस्था ।
यी चार कुराहरुबाट मानव जीवन पूर्ण हुन्छ भन्ने वैदिक मान्यता रहिआएको छ ।
म्याक्समुलरले द लाइफ अफ् रामकृष्ण एन्ड हिज सेईंग्समा भनेका छन्– पहिलो र दोस्रो सबैले बुझ्छन् । तेस्रो र चौथो जीवन पवित्रता र त्यागका साथ बिताउने अवस्था हो तर त्यागपूर्ण जीवन अर्थात् सन्न्यास कस्तो हो यो हामी युरोपेलीलाई थाहा छैन । दुवै जीवनको मुख्य अन्तर के हो भने एउटामा वन बाहिर बस्ने हो जसमा परिवारसंग जीवन बिताउन सकिन्छ । केटाकेटीको रेखदेख हुनसक्छ । हवन पूजा हुनसक्छ । ती सबै कुरा जुन धर्मशास्त्रमा उल्लेख छन्, ती सबै काम गर्न सकिन्छ । अन्तिम जीवनमा एक्लै कसैको सहारा बिना बस्नु पर्छ । सबै कुरा छोडेर बस्नु पर्छ । सन्न्यासका बारेमा स्वामी विवेकानन्दले के भनेका छन् भने विश्वमा यो परम्परा हिन्दुहरुले सुरु गरेका हुन् । यो एक उत्कृष्ट परमपरा हो ।
वास्तवमा सन्न्यास भन्ने शब्दसंग संस्कृत साहित्य र परम्पराका अनुयायीले जति सजिलोसंग बुझ्न सक्छन् त्यति सजिलोसंग युरोपियनले बुझ्दैनन् । उनीहरुको भाषामा यसका लागि कुनै उचित शब्द पनि छैन । कोहीले उनीहरुलाई जंगलमा बस्ने पिछडिएको जाति भनेर पनि बुझ्न सक्छन् । ज्ञानको भण्डार र सबै सुख सयल जानेको भोगेको र त्यागेको भनेर बुझ्न कठिन मान्दछन् । उनीहरुले सुरुमा सन्न्यासीलाई जिप्सी जस्तो कुनै घुमन्ते जाति भनी बुझ्दथे । अलेक्जेन्डरको विवरण दिने इतिहासकारहरुले पनि सन्न्यासीहरुलाई वनमा बस्ने अनौठा व्यक्तिहरु भनेका छन् । युरोपियन समाजमा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, र सन्न्यास आश्रमको अन्तर पाईंदैन । सनातन वैदिक परम्परामा सामाजिक र गृहस्थभन्दा उच्च स्थानको सम्मान राख्ने यी व्यक्तिहरु युरोपियन दृष्टिकोणले असामाजिक मानिन्छन् ।
संस्कृतमा वानप्रस्थ र सन्न्यास अवस्थाहरुको अलग अलग नाम उल्लेख पाइन्छ तर दुवैको अन्तर के हो भने संसारको सामान्य त्याग वानप्रस्थ हो भने संसारिक तृष्णाको पूर्ण त्याग र सबै कृत्यहरुको परिसमाप्ति, मनमा कुनै चाहना नराख्नु र निश्चित वास स्थान नहुनु सन्न्यास हो । सन्न्यासीको अर्को नाम अवधूत पनि हो । जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ जसका सारा बन्धन समाप्त भए ।
सन्न्यासको प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषदमा छ तर त्यस उपनिषदबाट वानप्रस्थ र सन्न्यासको अन्तर स्पष्ट हुंदैन । चारवटै आश्रमको अन्तर स्पष्ट गर्ने वाक्यांश जाबालोपनिषद, खण्ड ४ मा पाइन्छ, राजा जनकले सन्न्यास के हो र कसरी लिनु पर्छ भनी गरेको प्रश्नको उत्तरमा जसमा याज्ञवल्क्यले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, र वानप्रस्थ पछिका सन्न्यासको विवरण दिएका छन् । तुरीयातीतोपनिषदमा अवधूत मार्गको विवरण, नारदपरिव्राजकोपनिषदमा आतुर सन्न्यास लिने तरिका तथा सन्न्यासीले पालन गर्नु पर्ने नियमहरु बताइएको छ । आदि गुरु शंकराचार्यले आठ वर्षको उमेरमा आतुर सन्न्यास लिएका थिए । स्नान गर्न जांदा खोलामा उनलाई गोहीले समात्यो । आफु जीवित बस्ने आशा नभए पछि उनले आतुर सन्न्यास लिए । किनभने उनले के सुनेका थिए भने सन्न्यास नलिइकन मुक्ति हुंदैन ।
सन्न्यासी पनि सक्कली र नक्कली हुन सक्छन् । अझ नक्कली सन्न्यासीको चुरीफुरी धेरै हुने गर्छ । सक्कली र नक्कली सन्न्यासीमा त्यही फरक हुन्छ जुन असल मुद्रा र कमसल मुद्रामा हुन्छ । तर असल र कमसल दुवै मुद्रा चलनमा छन् भने स्वाभाविक रुपमा कमसलले असललाई चलन बाहिर गराइदिन्छ । शिवपुरी ब्ाँबाको बारेमा धेरैले मृत्यु पछि मात्र थाहा पाए । पाइलटबाबाले नेपालका साधुसंग योग सिकेको बताएका छन् । जसको बारेमा पाइलटबाबालाई थाहा छ, धेरै नेपालीलाई थाहा छैन ।
तर विचक्षण अर्थात् व्यवहारकुशल मानिसहरुले सबै कर्मको फल त्याग गर्नुलाई त्याग भन्दछन् ।
भनिन्छ, अकबरको दरबारका एक जना मन्त्री बीरबल पनि ज्यादै कुशल व्यक्ति थिए ।
एक दिन अकबरले बीरबललाई सोधे– बीरबल, म ठुलो कि तिम्रो भगवान् विष्णु ?
बीरबलले तत्काल उत्तर दिए– यो पनि कुनै सोध्ने प्रश्न हो र सरकार ? हजुर नै ठूलो ।
अकबरले खुशी भएर भने– किन म ठुलो ? भगवान् विष्णुले गर्न नसक्ने मैले के गर्न सक्छु ?
बीरबल– सरकारले मलाई देश निकाला गर्न सक्नुहुन्छ । भगवान् विष्णुले त्यो गर्न सक्नुहुन्न ।
यद्यपि सजाय“ धेरै दिनसक्ने शक्ति अकबरमा देखियो तर तीनलोकका मालिक विष्णुले देश निकाला कहां गर्ने ? सारा सृष्टि उनैको छ । बीरबल जस्तो व्यक्तिलाई व्यवहारकुशल भनिन्छ ।
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण ः ।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।।३।।
कुनै मनीषीले के भन्दछन् भने कर्म जति सबै दोषयुक्त छन्, त्यसैले त्याग्नु पर्छ । र अन्यले के भन्दछन् भने होइन यज्ञ, दान, र तपको त्याग गर्नु हुंदैन ।
मनीषीको अर्थ हो जसले मनन गरेर बोल्छ । जसले बोले पछि दुर्जनहरु पनि शान्त हुनजान्छन् । विचार गरेर बोल्नेले कसैको पनि कुभलो बोल्दैन । त्यसैले त्यो माननीय पनि हुन्छ । रघुवंशमा भनेको छ– माननीयो मनीषिणाम्...।
सबै कर्म दोषपूर्ण हुन्छन् । जसरी रोग निको पार्ने औषधिको दोषप्रभाव हुन्छ भन्दैमा त्यसको त्याग गर्नु हुंदैन त्यसै गरी यज्ञ, दान र तपलाई त्याग्नु हु“दैन । यो कुरा केही अन्यले भनेका छन् । यहा“ भगवान् कृष्णले आफ्नो नाम नलिइकन यज्ञ, दान, र तप त्याग गर्नु हु“दैन भन्नु भएको छ । यो कृष्णको विचक्षणताको उदाहरण हो । श्रीकृष्णले यज्ञ, दान, तप त्याग गर्ने कुराको समर्थन नगरेको स्पष्ट बताउनु भएको छ । यी दोषपूर्ण भए पनि गर्दै रहनु पर्छ । किनभने यिनै कर्मले व्यक्तिको आन्तरिक अनुभूति तिख्खर पार्छन् । यहा“निर स्मरणीय के छ भने छान्दोग्य उपनिषदमा केवल तीन कुराहरुलाई धर्मको आधार बताइएको छ– यज्ञ, अध्ययन, र दान ।
कबीरले भनेका छन्– ज्यों गु“गे ही को गुड अन्तरगत ही भावै । कुनै लाटोले गु“ड खायो । सारै मीठो लाग्यो । तर बताउने कसरी ? मुठी पारेर गालामा लगाउने ? तर के यसबाट अरुले त्यसलाई कति मीठो लाग्यो, कस्तो मीठो लाग्यो, बुझ्छन् ? केवल ईशारा वास्तविक अभिव्यक्ति होइन । बोलयो कि दोष हुन जान्छ ।
यहुदीहरु, जुन संसारका प्राचीनतम जाति मध्येको एक हो, मा एउटा अनौठो परम्परा छ । उनीहरुले ईश्वरका लागि प्रयोग हुने शब्द गड, जी ओ डी लाई पूरा लेख्दैनन् । उनीहरुले जी र डीको बीचको ओ लेख्दैनन् । यी दुवै शब्दलाई जोड्न बीचमा धर्को तान्छन् । उनीहरुको मान्यता के हो भने ईश्वर पूर्ण र दोषरहित छ । तर हामी अपूर्ण र दोषयुक्त छौं । त्यसैले हामीले प्रयोग गर्दा त्यसमा कुनै न कुनै दोष हुनजान्छ । दोषपूर्ण लेखेर आफ्नो अपूर्णताको स्वीकारोक्ति हो यो ।
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ।।४।।
हे भरत श्रेष्ठ, सन्न्यास र त्याग यी दुवैमध्ये त्यागको बारेमा तिमी मेरो निश्चय सुन । हे पुरुषसिंह, त्याग तीन प्रकारको बताइएको छ ।
त्यागको एउटा अर्थ हो बहादुर, वीर । जैन धर्मका अन्तिम तीर्थंकरलाई महावीर भनिन्छ । यसको अर्थ हो, सबै कुराको त्याग गरिसकेको । उनले शरीरका वस्त्र समेत सहज त्याग गरे । करपात्रीजीले खाने थालीको समेत त्याग गरे । हातमा थापेर खाना खाने । मस्तराम बाबाले खाना, वस्त्र सारा त्यागे । कसैसंग भिक्षान्न पनि नमाग्ने । कसैले ल्याइदिए खाने, नत्र हप्तौं दिनसम्म भोकै । यदि कुनै शिष्यले खानेकुरा मागेर ल्याइहाल्यो भने छुंदै छुन्नथे । वस्त्र पनि आफैं नलगाउने । शिष्य र भक्त संगै रहेछ भने ओढाई दिन्थ्यो, नत्र निर्वस्त्र । वस्त्र जहां खस्यो, खस्यो । छोड्यो, हिंड्यो । स्वामी रामतीर्थ कुनै पनि कुरा संग्रह गर्दैनथे । स्वामी रामकृष्णले पैसा छुंदैनथे । शिवपुरी बाबाले जन्मथलो, नातेदार धनसमपत्ति सर्वस्व त्याग गरे । न्यूनतममा जीवनयापन गरे । जबकि उनलाई भेट्न भारतका राष्ट्रपति समेत काठमाडौं आएका थिए । जोसमनी सन्त ज्ञानदिलदासले गाउ“ बस्ती त्याग गरेर वनको छेउमा डेरा बनाए । ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र र खप्तड बाबाले आफ्नो जन्मभूमि त्यागे ।
भगवान श्रीकृष्णले निश्चित समाधान दिइरहनु भएको छ– निश्चयं शृणु, निश्चितं मतम् ।
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।।५।।
कर्तव्यानीति मे पार्थ, निश्चितं मतमुत्तम् ।।६।।
यज्ञ, दान तथा तपरुप कर्मलाई त्याग्नु उचित छैन (यी क्रिया अवश्य गर्नु पर्छ) किनभने यज्ञ, दान, र तपले मनीषिहरुलाई पवित्र बनाउंछन् । तर हे अर्जुन, यी कर्महरु पनि आसक्ति तथा फललाई त्यागेर गर्नु उचित हुन्छ । यस्तो मेरो निश्चित र उत्तम मत छ ।।५–६।।
महात्मा गान्धी र विनोबाजीले यज्ञको अर्थ परोपकार लगाउ“छन् । मानव जातिका समस्याको हल यज्ञमा नै निर्भर छ । पं.श्रीराम शर्मा आचार्यका अनुसार यज्ञ शब्दका तीन अर्थ हुन्छन् पहिलो देव पूजा, दोस्रँे दान र तेस्रो सामूहिकपन । र यज्ञहरुको वास्तविक लाभ लिनु छ भने सार्वजनिक सहयोगद्वारा गराउनु नै सर्वोत्तम हुन्छ । महाभारत र रामायणको अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने त्यस कालमा यज्ञ गराउने दायिŒव राज्यको हुन्थ्यो । यसलाई आर्थिक वितरण, राजकीय सूचना सार्वजनिक गर्नु, नागरिक चेतना विस्तार, र राष्ट्रिय विषयहरुमा छलफलका लागि विद्वान्हरु संगको गोष्ठीका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । यस बाहेक ठूलो राजकीय उपलब्धि, राजाले सन्न्यास लिंदा वा राज्यारोहण गर्दा पनि यज्ञ हुने गर्थे । यद्यपि वर्तमान समयमा सार्वजनिक यज्ञ योगी नरहरिनाथले गराएको देखिन्छ तर पं. नारायण प्रसाद पोखरेलले समुदायको प्रयोग गरेर यज्ञ विधिबाट भौतिक विकासमा उल्लेखनीय काम गरेर यसको व्यापक प्रयोग गरे । उनले थोरै समयमा दुइ अरबभन्दा बढीको विकास निर्माण कार्य यज्ञ मार्फत् सञ्चालन गरेका हुन् । उनले वि.सं.२०५०को दशकमा पंं.पोखरेलको नेतृत्वमा नेपालमा यज्ञ मार्फत विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम इत्यादि आर्थिक, सामाजिक र कल्याणकारी कार्य भए । उनको अन्तिम तर अपूर्ण यज्ञ रुपन्देहीमा नै भएको थियो । जहा“ उनको रहस्यमय हत्या हुनपुग्यो । गीतामा यज्ञको महŒव विभिन्न स्थानमा व्याख्या गरिएको छ । तर यज्ञको बारेमा विस्तृत रुपमा अध्याय ३.९–१५मा व्याख्या गरिएको छ ।
गीताको उपलब्ध सबभन्दा पुरानो शांकरभाष्य, जुन आज भन्दा १२०० वर्ष अघि गरिएको हो, मा यज्ञको व्याख्या निम्नलिखित प्रकार गरिएको छ ।
नियत कर्म निःस्वार्थ भई पूरा गर्नु पर्दछ किनभने यज्ञ नै ईश्वर हो । उसका लागि कर्मफल र आसक्तिरहित भएर जुन कर्म गरिन्छ ती कर्म गर्नाले मनुष्य समुदाय कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनजान्छ । सृष्टिको शुरुमा यज्ञ र प्रजालाई संगै उत्पन्न गरी जगतको रचयिता ब्रह्माले भन्नु भएको थियो– यस यज्ञ अर्थात् सामूहिक कृत्य र परस्पर सहयोगबाट तिमीहरुले उन्नति गर्नु । अनि तिमीहरुले चिताएको पनि पुग्ने छ ।
यस यज्ञबाट दैविक शक्तिहरुको पनि उन्नति हुनेछ । उनीहरु पानी वर्षाएर तिमीहरुको उन्नतिमा सहयोग गर्नेछन् । यसरी एकले अर्काको उन्नति गर्दै, यज्ञ भावनाद्वारा तिमीहरु सबैले ज्ञान प्राप्त गर्ने छौ ।
यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भए पछि देवताहरुले दिएका स्त्री पुत्र आदि इच्छित भोग तिमीहरुलाई दिने छन् । देवता अर्थात् शक्तिहरु । सबै प्राकृतिक शक्ति अनुकूल नभइकन उन्नति गर्न सकिंदैन । आुधनिक विज्ञानले पनि गीतामा जस्तै आज मानसिक शक्तिलाई प्राकृतिक शक्तिको रुपमा स्वीकार गर्दछ ।
ती देवताहरुले दिएका भोग उनीहरुलाई सम्मान नदिइकन जसले केवल आफ्ना शरीरको तृप्तिका लागि मात्र कर्म गर्छ त्यो देवताको भाग खाने भएकोले चोर हो ।
मानव समुदायले प्रकृतिको सम्मान नगरीकन केवल आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न जथाभावी उत्पादन र उपभोग गरेकोले नै वर्तमान समयको भीषण वातावरणीय समस्या उत्पन्न भएको हो भन्नेमा सबै वातावरणविद् एक मत छन् । आजको वातावरण बिगार्नुमा, पशुपंक्षी लोप गराउनुमा, उर्वराशक्ति ह्रास गराउनुमा मानव समुदायले अरबौं खरबौं रुपैया“ खर्च गरेको छ । यो वातावरण सित्तैमा बिग्रेको होइन । तर के त्यत्तिकै लगानीमा पुनरुद्धार हुन सक्छ?
प्राणीहरुको प्रत्यक्ष उत्पत्ति अन्नबाट हुन्छ किनभने उपभोग गरिएको अन्नबाट रगत र वीर्य बन्छ र प्राणी उत्पत्तिको आधार रगत र वीर्य नै हो । अन्नको उत्पत्तिको आधार वर्षा हो र वर्षाको आधार यज्ञ हो । यज्ञानुष्ठान विहित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ । कर्म समुदयलाई वेदबाट र वेद स्वयं परमात्मा हो भन्नेकुरामा ध्यान राख्नु पर्दछ । यसले के सिद्ध हुन्छ भने सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञमा नै प्रतिष्ठित छ तसर्थ यज्ञ क्रिया सृष्टि चक्रको प्रतीक हो । अग्निमा विधिपूर्वक दिइएको आहुति सूर्यसंगै सम्बन्धित हुन जान्छ र सूर्यको आधारमा नै वर्षा हुन्छ । वर्षा भनेको अन्नको आधार हो र प्राणीहरुको जीवन अन्नमा नै भर पर्छ ।
क्रियारुप कर्म, वेदरुप ब्रह्मबाट उत्पत्ति भएको हो । वेदरुप ब्रह्म साक्ष्ाँत् परमात्मा नामक अक्षरबाट उत्पत्ति भएको छ । सबै अर्थहरुलाई प्रकाशित गर्ने भएकोले नै त्यो सर्वगत् हो । यज्ञ विधिमा वेदको प्रधानता भएकोले जसले त्यो गर्छ त्यो सर्वगत हुंदै सदा यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन जान्छ । जुन मानिसले जगतको चक्र अनुसार कर्म गर्दैन त्यसको जीवन पापमय भएको हुन्छ । यस्तो केवल इन्द्रिय भोगमा लिप्त मानिस बांच्नु पनि व्यर्थ छ । तसर्थ अज्ञानी अधिकारीले कर्म अवश्य गर्नु पर्छ । अनात्म अधिकारी पुरुषलाई आत्मज्ञानको योग्यता प्राप्त हुनु अघि ज्ञान निष्ठा प्राप्त गर्न कर्मयोगको अनुष्ठान अवश्य गर्नु पर्दछ । शंकराचार्यका अनुसार, आत्मज्ञान प्राप्त गर्न यज्ञानुष्ठान अनिवार्य विधि हो । यो देवता र मनुष्यका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने धार्मिक कृत्य पनि हो ।
यज्ञ आधुनिक विज्ञानको उद्गम बिन्दु पनि हो । आधुनिक विज्ञानको आधार गणित हो र गणितको प्रारम्भ यज्ञको आहुतिहरुबाट भएको हो । गणितको एक महत्वपूर्ण शाखा ज्यामितिको आविष्कार यज्ञवेदीबाट भएको हो । महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्– हामी वैदिक ऋषिमुनिहरु प्रति ऋणी छौं । किनभने उनीहरुले गणितको आविष्कार गरेका हुन् । गणितको प्रयोग बिना आजको भौतिक विज्ञानले उचाई प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो । सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थोमस हग्बेनले भनेका छन्– वैदिक ऋषिहरुले विश्वलाई शून्य दिए जसले वर्तमान गणित विकसित हुनसक्यो । मनुस्मृतिमा भनिएको छ– सत्य युगमा तप, त्रेतामा ज्ञान, द्वापरमा ज्ञानको महत्त्व भए जस्तै कलियुगमा दानको महत्त्व छ । स्वामी अपूर्वानन्दका अनुसार, दान चार प्रकारका हुन्छन्
२. विद्या दान
३. प्राण दान
४. अन्न दान
यसमध्ये ज्ञान दान सर्वोत्कृष्ट दान हो । किनभने ज्ञाननै समाधानको अन्तिम साधन हो । यदि ज्ञानले कुनै समस्याको समाधान हुंदैन भने संसारमा कुनै पनि कुराले समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले गीता ४.३८ मा भनिएको छ, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
निश्चित मत प्रस्तुत गर्नाले भगवान् कृष्णलाई महानतम गुरु भनिएको हो ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।।७।।
अनि, तोकिएका कर्मको त्याग, सन्न्यास, हुन सक्दैन । अविवेकीबाट हुने त्यस्तो परित्यागलाई तामस भनिएको छ ।।७।।
शेरे आफ्नो बिरालोसंग दिक्क पर्यो । अब यसलाई घर नफर्कने गरी कतै छोडेर आउ“छु भन्दै झोलामा हालेर नजीकै जंगलमा छोडेर आयो । घर फर्केर आयो । ढोकामा त बिरालो बसिराखेको ।
खपि नसक्नु रिस उठ्यो । अर्को चोटि घनघोर जंगल भित्रै लिएर गयो । अनि बिरालोलाई छोडेर घर फर्किने बेलामा घरमा फोन गर्यो– मैया“, बिरालो घर आयो ?
श्रीमती– अ“, आइपुग्यो ।
शेरेले रिसाएर भन्यो– त्यस अलच्छिना बिरालोलाई तुरुन्तै यहा“ पठाउ त । मैले बाटो बिराए“ ।
बिरालो भनेको हाम्रा सांसारिक इच्छाहरु हुन् । जुन त्याग गर्न खोज्यो झन् गहिरो गरी भित्र बस्छ । शेरेले झैं आफैं बाटो बिराइन्छ ।
सात्त्विक त्यागका विविध उदाहरण इतिहास र पुराणमा पाइन्छन् । महावीरले राजपाठ त्याग गरे । सिद्धार्थले १८ वर्षमा पत्नी यशोधरा र भर्खर जन्मेको पुत्र त्याग गरे । बुद्धत्व प्राप्त भए पछि जब बुद्ध कपिलवस्तु आए, बुद्धलाई दर्शन गर्न सबै आए तर यशोधरा आइनन् । बुद्ध नै सारिपुत्रलाई लिएर भेट्न गए । त्यहां यशोधराले बुद्धको पाउ स्पर्श गरिसके पछि एक गहन प्रश्न गरिन्– जुन सत्य तपाईंले निरञ्जना नदीको तटमा बोधिवृक्षको मुनि प्राप्त गर्नु भयो । के त्यो सत्य यहां छैन ? र यहां त्यसको बोध हुन सक्दैन? बुद्ध निरुत्तर भए ।
पछि आफैंले सहर्ष राहुललाई प्रव्रज्या लिन प्रेरित गरिन् । आफैंले पनि प्रव्रज्या मागिन् । यद्यपि बुद्धले नै यशोधरालाई प्रव्रज्या लिन अनेक आलटाल गरे ।
भनिन्छ, बुद्धले वनमा गरेका तपस्याहरु यशोधराले दरबारमा गरिन् । जब यशोधराले खबर सुनिन् कि बुद्धले एक छाक खान्छन् भुईंमा सुत्छन् र साधारण चीवर लगाउंछन् । उनले पनि दरबारमै बसी सोही अनुसरण गर्थिन् । यशोधराको जीवन त्यागको समुद्र छ । बिलकुल निस्वार्थ ।
रामका साथमा गएकी सीताको जीवनको त्याग बारे त कथा नै बनेको छ । तर लक्ष्मणकी प्रिया, उर्मिला, जसलाई वनमा जान पतिबाट अनुमति प्राप्त भएन । पतिको आज्ञा मानेर चौध वर्ष एक्लै जीवन बिताइन् । उनको जीवनको त्याग अद्भुत छ । ईश्वरभक्ति, आफ्नै मात्र होइन सौताने सासुहरुको निरन्तर सेवा । र निरन्तर लामो प्रतिक्षा ।
स कृत्वा राजसं नैव नैव त्याग फलं लभेत् ।।८।।
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेद्रर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः ।।९।।
कर्म गर्नु दुख छ भन्ठानेर शरीरलाई कष्ट हुन्छ भन्ने डरले जसले कर्मलाई त्याग गर्छ, उसले राजस त्याग गरेको छ । त्यस्तो त्याग गरेर पनि त्यागीले त्यागको फल पाउंदैन ।।८।। हे अर्जुन, कर्म गर्नै पर्दछ भन्ने यस्तो कर्तव्य बुद्धिले आसक्ति र फललाई त्यागेर जुन नियत कर्म गरिन्छ त्यस आसक्ति र फलको त्यागलाई सात्त्विक त्याग भनिन्छ ।।९।।
स्वामी रामकृष्णले आफ्ना शिष्यहरुलाई भन्ने गर्थे– ईश्वर लाभ नहुञ्जेल सबै कर्म– यज्ञ, दान, तप, पूजा, विधि, ध्यान, स्नान, जप इत्यादि गर्दै रहु । उनले बडो सरल शब्दमा भनेका छन्– फल आएपछि फुल आफैं झर्छ । ईश्वर लाभ पछि कर्ममा आसक्ति आफैं हराउंछ । उनले आफ्ना हातले धनसम्पत्ति छुंदैनथे । स्वामी विवेकानन्दका अनुसार, एक पटक माता सारदाले केही पैसा रामकृष्णको ओच्छ्यानमा राखेर बिर्सिछन् । त्यस रात भरि रामकृष्ण छटपटीले निदाउन सकेनन् । त्यो पैसा त्यहांबाट हटाए पछि मात्र उनी निदाए । उनको त्याग यस्तो थियो । झुक्याएर पनि उनलाई कुनै सांसारिक वस्तुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भोग गराउन सकिंदैनथ्यो ।
उपनिषदहरुमा त्यागका उच्चतम आदर्श प्रस्तुत गरिएका छन् । ईशा उपनिषदको पहिलो श्लोक तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा... उसले मात्र वास्तविक भोग गर्छ, जसले त्याग गर्छ...भन्दै त्यागको महिमाबाट प्रारम्भ गरिएको छ ।
गीतालाई पनि उपनिषद् भनिन्छ । यसको हरेक अध्याय एउटा उपनिषद् हो । अठारौं अध्यायलाई मोक्षसन्न्यासयोग भनिएको छ । सन्न्यास नभई मोक्ष हु“दैन । मोक्ष अर्थात् मुक्ति । यस अध्यायमा सम्यक न्यास र मुक्तिको सम्बन्ध बताइएकोा छ । यस अध्यायमा भगवान् कृष्णले तीन प्रकारका त्याग बताउनु हुन्छ । तर व्याख्याको क्रम उल्टो छ । अन्य सबैको क्रम बताउ“दा सात्त्विक, राजस अनि तामस क्रमशः बताइएको छ । तर त्यागको सन्दर्भमा पहिला तामस, अनि राजस र अन्तमा सात्त्विक त्यागको व्याख्या गरिएको छ । यसबाट भगवान् कृष्णको त्यागलाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्त हुन्छ । अर्को ध्यान दिनु पर्ने कुरा के भने सन्न्यासलाई सात्त्विक, राजस, र तामस भेद गरिएको छैन । यसबाट सन्न्यास प्रति भगवान श्रीकृष्णको स्वाभाविक आदर देखिन्छ । सन्न्यासको अर्थ हो सम्यक् न्यास ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।।१०।।
अकुशल कर्मलाई जसले द्वेष गर्दैन र कुशल कर्ममा जो आसक्त हुंदैन, त्यस्तो शुद्ध, सत्त्वगुणयुक्त, संशयरहित र मेधावी नै (सच्चा) त्यागी हो ।
कुशलको अर्थ हो प्रसन्नता । कुशल मंगल छ ? भनेर सोध्नु भनेको खुशीसाथ हुनुहुन्छ भनेको हो । अकुशल भनेको प्रसन्नता नदिने भनेको हो । त्यसैले कुशल र अकुशल भनेको खुशी दिने र खुशी नदिने काम । जुन मानिस खुशी दिने वा बेखुशी दिने काममा आसक्त हुंदैन । आसक्तको अर्थ हो खुशी दिने कामले खुशी र बेखुशी दिने कामले दुखी हुंदैन । त्यो संशय, अनिश्चिता र द्विविधारहित हुन्छ । त्यो नै बुद्धिमान हो । वास्तविक कुरा बुझे पछि सबै अन्तर समाप्त हुन जान्छन् । संशयहरु छिन्न भिन्न हुन्छन् । ठूलो मानिस चकलेट पाएर खुशी हुंदैन । किनभने उसले यसको आसक्ति बेकार हो भन्ने बुझेको छ । जसले संसार बुझेको छ, उ यसमा आसक्त हुंदैन । त्यसैले आचार्य शंकरले भनेका हुन्, जगन्मिथ्या । जगत्लाई हामीले जस्तो देखेका छौं, शंकरले त्यस्तो देख्दैनन् । जापानमा वल्लो घरको पुतलीको पल्लो घरका पुतलीसंग विवाह हुंदा जन्ती बोलाउने र बाजा बजाउने चलन छ । घरका सारा बुढाबढी त्यस विवाहमा सरीक हुन्छन् । भोज हुन्छ । घरका सबै मानिसले उही अभिनय गर्छन् जुन युवायुवतीको विवाहमा हुन्छ । युवकयुवतीको विवाह बहुत ठुलो कुरा हो । तर वृद्धहरुका लागि त्यो पुतली खेल हो । के फरक छ र ?
लोक व्यवहारलाई संगै लिएर जाने उदाहरण हामी भगवान् श्रीकृष्णको जीवनमा पाउंछौं । उनको प्रसन्नता वा अप्रसन्नता, हिंसा वा जीवनदान कुनैमा पनि संशयरहितता छ । आक्रोश वा खुशी छैन । प्रसन्न पनि हुन्छन्, दुखी पनि हुन्छन् तर त्यसमा आसक्ति छैन । न दुखमा, न सुखमा । एकनासको सामान्य अवस्था ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।।११।।
(किनभने) शरीरधारीले सम्पूर्ण कर्मको त्याग गर्न सक्दैन । तर जसले कर्मफलको त्याग गर्छ, उ त्यागी हो, यस प्रकार बताइन्छ ।
मानिसले कुनै पनि क्रियाकलाप आफ्ना आवश्यकताको पूर्ति हेतु गर्छ । मानिसका आवश्यकता कति छन् ? आवश्यकता भनेको मानिसलाई चाहिने वस्तु र सेवाहरु । सबैलाई थाहा छ मानिसका आवश्यकता अनन्त छन् । त्यसैले अर्थशास्त्रमा यो शब्द कहिल्यै पनि एक वचनको रुपमा प्रयोग हुंदैन । त्यसमा दिनक्कै नयां नयां आवश्यकता थप भइ रहेका हुन्छन्, मृत्युपर्यन्त । मानिसका आर्थिक आवश्यकतालाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ– अनिवार्य, आरामदायक, र विलासिता । मानिसका अनेक सामाजिक र मनावैज्ञानिक आवश्यकता पनि हुन्छन् । जस्तै, स्नेह, सम्मान, सामाजिक रहनसहन, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, र अस्तित्त्वको चाहना । मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले उसले परिवारबाट, समाजबाट अनेक प्रकारका चाहना राख्छ । मानसिक क्षमता राख्ने प्राणी भएकोले उसका व्यक्तिगत मानसिक आवश्यकता पनि हुन्छन् । लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई कसैले कविता नलेख यो अनावश्यक काम हो भने के होला ? लेख्नु उनको मानसिक आवश्यकता हो । कैयौं चित्रकारले चित्र कोरेर लुकाएर राखेका उदाहरण छन् ।
मानिसले विलासिता आवश्यकता पूरै त्याग गर्नसक्छ । आरामदायक आवश्यकता पनि एक हदसम्म त्याग गर्नसक्छ । तर अनिवार्य आवश्यकता त्याग गर्न सक्दैन । मानिसलाई भोक लाग्छ । उसलाई निद्रा लाग्छ, सुरक्षा चाहन्छ । मानिसले आनन्द चाहन्छ । यदि भौतिक आवश्यकता नै मानिसले त्याग गर्न सक्दैन भने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र मानसिक आवश्यकता त अझै सूक्ष्म हुन्छन् । त्यसैले भगवान् कृष्णले भन्नु हुन्छ– कर्म त्याग होइन, कर्मफल त्याग गर्नु पर्छ ।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ।।१२।।
कर्मफलको त्याग नगर्ने मानिसलाई कर्मको शुभ, अशुभ, र मिश्रित गरी तीन प्रकारका फल प्राप्त हुन्छ । तर कर्मफल त्याग गर्ने सन्न्यासीलाई (यी तीनै प्रकारका फलमध्ये) केही पनि हुंदैन ।
जीवनको व्यवसायमा तीन प्रकारका परिणाम प्राप्त हुन्छन्– नाफा, नोक्सान, र मिश्रित अवस्था । यदि जीवनको व्यवसायमा हामीले थोरै परिश्रम गर्दा सोचे अनुरुप वा बढी हात पर्यो भने त्यसलाई वृद्धि वा नाफा वा राम्रो भयो भनिन्छ । तर सोचे विपरीतको फल प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई क्षय वा हानि वा उपलब्धि खोसिएको भनिन्छ । र तेस्रो फल हो दुवैको मिश्रण । दुवैको बराबर मिश्रण हानि (नाफा) रहितताको अवस्था हो । न उधोका लेना न माधोका देना । यसभन्दा कम वा बढीमा हानि वा नाफा हुन्छ । यी सबै अवस्था सामान्य मानिसका लागि हुन् । यस जन्मको नभए विगत जन्मको पनि कर्मफल भोग गर्नुपर्छ । तर शांकरभाष्यमा आचार्य लेख्छन्– सन्न्यासी पूर्णतया मुक्त हुन्छ । उसलाई असल, खराब वा मिश्रित कुनै प्रभाव पर्दैन । किन ? किनभने उसले हानि मात्र होइन नाफा पनि त्याग गरिसकेको हुन्छ ।
तर, जसले नाफाको आशा गर्दैन उसलाई हानिले के प्रभाव पार्न सक्ला ?
साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ।।१३।।
हे महाबाहु, सम्पूर्ण कर्महरुको सिद्धिका लागि पा“च कारणहरु बताइएका छन्, सुन । यो कुरा सांख्य र कृतान्त दुवैले पुष्टि गर्छन् । ।।१३।।
सांख्ये भनेको सांख्यशास्त्र वा सांख्य दर्शन हो । विद्वान्हरुले कृतान्तको अर्थ गर्छन् वेदान्त शास्त्र अर्थात् उपनिषद् दर्शन । यहा“ यो अर्थ पनि मिल्छ । तर सर्वसार उपनिषदमा वेदान्तको सम्बन्धमा शताब्दीका महान् वक्ता ओशो रजनीशको विश्लेषण छ– वेदको सही पर्याय हो विज्ञान, साइन्स । त्यसैले वेदान्तको अर्थ हो जहां ज्ञानको पनि अन्त हुन्छ । त्यो अवस्था जब ज्ञान पनि पछि छोडिन्छ, त्यो वेदान्त हो । वेद जुन साधनले जानिन्छ त्यो ब्रह्म हो र ब्रह्म जुन कुराले जानिन्छ त्यो वेदान्त हो । वेद नोईंग हो र वेदान्त बीईंग हो । ज्ञानी र ज्ञानातीतमा जुन अन्तर छ, त्यही अन्तर ज्ञानी र वेदान्तीमा हुन्छ । आचार्य शंकरले पनि वेदान्ती अवस्थालाई धर्माधर्म सबै त्याग गरेको भनेका छन् ।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ।।१४।।
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर ः ।
न्याøयं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतव ः ।।१५।।
पश्यत्कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति ः ।।१६।।
अधिष्ठान (शरीर), कर्ता (मन), करण (इन्द्रिय), प्राणादि वायु (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) यी चार (कुरा भए) र पांचौं दैव । विविध अनेक प्रकारका चेष्टाका लागि...। मानिसले मन, शरीर, र वाणीले उचित वा अनुचित जुन कर्म गर्दछ, त्यसका यी पांच हेतु (कारण) हुन्छन् तर यस्तो भए तापनि जुन अकृत (अशुद्ध) बुद्धि भएकोले त्यस, कर्मको, विषयमा केवल आफुलाई कर्ता देख्छ, त्यस मलिन बुद्धि मानिसले यथार्थ देख्दैन ।।१४–१६।।
परिणामबाट कारण अनुमान गर्न रेवरेन्ड थोमस बेयजद्वारा गणितीय सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । बेयजको के विश्वास थियो भने ईश्वरको चाहना मनुष्य मात्रको सुख र खुशी हो । यसलाई गणितीय रुपमा प्रमाणित गर्न उनले तथ्याङ्क संकलन गरे । उनले त्यसको विश्लेषणका विधि पनि निर्माण गरे । बेयजको यस विधिलाई प्रतिलोम प्रायिकता– इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थियोरम पनि भनिन्छ । बेयजको त्यस साध्यबाट जुन परिणाम निस्क्यो संभवतः त्यो उनको विचार अनुसार उपयुक्त भएन । अनि उनले यसलाई प्रकाशित गर्न रुचि लिएनन् । उनको मृत्युका धेरै पछि पियरे साइमन लैप्लास भन्ने गणितज्ञले स्वतन्त्र रुपमा त्यस पाण्डुलिपिलाई पत्ता लगाएर त्यस विवरणलाई गणितीय सिद्धान्तको वर्तमान रुप दिए ।
हिन्दु शास्त्रकारहरुले बारम्बार कारण र परिणाम मात्र होइन परिणाम र कारण सम्बन्ध स्पष्ट गरेका छन् । कुनै घटना भर्खरका कारणको परिणाम मात्र नभएर जन्मौंजन्मका कारणको परिणाम पनि हुनसक्छ । सृष्टिमा घटित हुने घटनाको केवल एक मात्र कारण पनि हुंदैन । अनेकौं कारण हुन्छन् । यसलाई सप्ष्ट गर्न महाभारतमा अनेक उदाहरण छन् । कर्ण पर्वको उदाहरण प्रस्तुत छ । अर्जुनभन्दा बहादुर भइकन पनि कर्ण किन युद्धमा पराजित भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा महाभारतमा कर्णको मृत्युको कारण केवल अर्जुन मात्र होइन भन्ने कुरा यस प्रकार बताइएको छ–
१. आफैंले दिएको आश्वासन–
कुन्तीले कर्णलाई उसका जन्मको रहस्य महाभारत युद्धको पूर्व सन्ध्यामा अचानक बताइन्– बाबु, तिमी राधेय होइनौ । तिमी कौन्तेय हौ । ज्येष्ठ पाण्डव । कुमारी अवस्थामा सूर्य पुत्रको रुपमा जन्माएकाले मैले समाजमा कलंकित हुने भयले त्याग गर्नु पर्यो । भाईहरुसंग युद्ध नगर । यो सुनेर कर्ण दुखी भए । तर कुन्तीलाई भने– दुर्योधन मेरो मित्र हो । मैले उसलाई युद्धमा साथ दिने वचन दिइसकेको छु । तर मैले तपाईंलाई के आश्वासन दिन्छु भने तपाईंका पांच पाण्डव सुरक्षित रहनेछन् । मैले अर्जुनलाई मारें भने म समेत पांच जना र अर्जुनले मलाई मार्न सके भने म बाहेक पांच जना । तर म राधेय भएर हुर्कें अब राधेय भएरै मर्न चाहन्छु ।
२. गुरुको कोप–
कर्णले शस्त्र विद्या सिक्नका लागि गुरु द्रोण कहां गएर निवेदन गरे । द्रोणले राजपुत्रहरुलाई सिकाएको स्थानमा एक साधारण सूतपुत्र लिन अस्वीकार गरे । त्यस पछि उनी परशुरामजी कहां पुगे । कर्णले आफुलाई भृगुवंशीय ब्राह्मणको सन्तान बताएर धुनर्विद्या सिक्न थाले । एक दिन परशुरामको शिरलाई कर्णले काखमा राखेर गुरुको सेवा गरिरहेका थिए । यसै समयमा एउटा कीराले भयानक पीडा दिने गरी कर्णको गोडामा टोक्यो तर कर्णले गुरुको सुविधाका लागि सबै सहन गरे । गुरुलाई यो थाहा भयो । कर्णको पीडा सहन गर्ने यो क्षमता देखेर परशुरामलाई उसको जातिको विषयमा शंका भयो । उनले क्रोधित भएर भने– तं ब्राह्मण हुनै सक्दैनस । त“ क्षत्रिय हुनुपर्छ । सांचो कुरा भन त“ को होस् ? नत्र मैले त“लाई सराप दिन्छु । कर्णले डराएर भने– म सूतपुत्र राधेय हुं । तर मलाई रथ चलाउन रुचि छैन । मलाई हतियार चलाउनमा रुचि छ । त्यसैले मैले असत्य जानकारी दिएर शिक्षा लिएको हुं । परशुरामले भने– गुरुलाई झुक्क्याएर सिकेकोले त्यो ब्रह्मास्त्र विद्याले अन्तिम क्षणमा त“लाई साथ दिने छैन ।
३. इन्द्रको भिक्षा–
सूर्यपुत्र कर्ण कवच कुण्डलसंगै जन्मेका थिए । यी दुवै कुराले कर्ण अजेय थिए । इन्द्रले अर्जुनको रक्षा गर्नका लागि भिक्षु वेशमा गई कर्णको सुरक्षा कवच र तेज बढाउने कुण्डल भिक्षा मागेका थिए । सूर्यले कर्णलाई छद्म वेशमा आएको इन्द्रलाई आफ्नो सुरक्षा कवच नदिन सावधान गरेका थिए । कर्णले सबै कुरा जान्दाजान्दै पनि माग्न आएकोलाई विमुख नफर्काउने आफ्नो नियम अनुसार, आफु असुरक्षित हुने गरी कवच र कुण्डल सहर्ष दान गरेका थिए ।
कर्णका सारथी तथा युधिष्ठिरका मामा शल्य (जुन माद्रीका भाई हुन्) थिए । उनलाई दुर्योधनले झुक्क्याएर आफ्नो पक्षमा मिलाएको थियो । तर उनले युधिष्ठिरलाई वचन दिएका थिए– भाञ्जा, तिमीहरुलाई अन्याय भएको जानेको छु । म तिमीहरुलाई साथ दिन आएको थिएं तर मलाई बाटोमा स्वागत सत्कार गरेर झुक्याइयो । तथापि मैले तिमीहरुको विजयका लागि नै चिन्तन गर्ने छु । उनले कर्णको सारथीको रुपमा रथ चलाउंदा कर्णलाई निरन्तर हतोत्साहित गर्दै भन्ने गर्थे– हे कर्ण तिमीले अन्यायको साथ दिइरहेका छौ । त्यसैले तिमी असफल हुने छौ । फलस्वरुप कर्ण उत्साहहीन हुंदै जान्थे । र उत्साहहीन योद्धाको जीत हु“दैन ।
शास्त्रकारहरुले दैवका विभिन्न अर्थ गरेका छन्– धर्माधर्म, पूर्व संस्कार, अन्तस्करण वा अज्ञात शक्ति । वास्तवमा यी सबैको सामूहिक रुप नै दैव हो । यसलाई दैव इच्छा, अज्ञात कारण वा एक्स फ्याक्टर भन्न सकिन्छ । महाभारतकारका अनुसार, दैव इच्छा के थियो भने अर्जुन सुरक्षित होस् र कर्ण असुरक्षित होस् ।
कर्णको द्वन्द्वपूर्ण मानसिक अवस्था, निष्ठा, र दानलाई आधार बनाएर लेखकहरुले सुन्दर सुन्दर कथाहरु रचना गरेका छन् । यसमा हिन्दीमा कर्ण की आत्मकथा र नेपालीमा द्वन्द्वको अवसान विशेष उल्लेखनीय छन् ।
हत्वापि स इमा“ल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।।१७।।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधः कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।।१८।।
जसमा म कर्ता हुं, यस्तो भाव हु“दैन, र जसको बुद्धि शुभाशुभ कर्ममा लिप्त (एकोहोरिएको) हु“दैन, त्यो पुरुष, यी सब लोकलाई मारेर पनि वास्तवमा हत्या गर्दैन, बद्ध पनि हुंदैन । ज्ञान, ज्ञेय, र ज्ञाता यी तीन कर्मका प्रेरक हुन् । करण, कर्म, र कर्ता यी तीन कर्मका आश्रय (संग्रहकर्ता ) हुन् ।।१७–१८।।
मनोविज्ञानको आधुनिक शाखा ज्ञानशास्त्र (काग्निटिभ साइन्स) गीताको यस श्लोकको विस्तार हो । यसमा सिकाई र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने मानवीय मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गरिएको छ । ज्ञान प्राप्त गर्ने तीन चरण र प्राप्त ज्ञानलाई क्रियात्मक रुप दिने तीन चरणका बारेमा वैज्ञानिक विशलेषण गरिएको छ । यसमा एक परिज्ञाता बाहेक सबै कुरा परिभाषित छन् । परिज्ञाता त्यो हो जसले सबै कुरा जान्दछ । (जसले सब कुरा जान्दछ, भन्ने मान्यताको द्वितीय श्रेणीको मान्यता के हुन्छ भने त्यसलाई जान्ने अर्को केही हुंदैन । त्यो अन्तिम हो, त्यसैले त्यो अपरिभााषित छ ।) तीन प्रकारका ज्ञान र तीन प्रकारका बुद्धि
ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।।१९।।
गुणको संख्या गर्नेहरुले ज्ञान, कर्म, र कर्ता गुणका भेदले तीन प्रकारका बताउंछन् । त्यो पनि यथावत्, जस्तो छ त्यस्तै, मैले भन्छु, सुन ।।१९।।
गुणको संख्या गर्नेहरु भनेको सांख्य शास्त्रकारहरु । यस शास्त्रमा सृष्टिको सम्पूर्ण विवरणलाई २४ वटा संख्याको रुपमा सबभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्ने शास्त्र हो सांख्य शास्त्र । यसको कुनै मतले मूल प्रकृति र अन्य प्रकृतिको कुरा गर्छन् भने कुनैले पुरुषको रुपमा ईश्वरलाई पनि समावेश गर्छन् । सांख्यशास्त्रका प्रणेता अक्षपाद गौतम हुन् । उनलाई सांख्यकपिल (आलारकालाम?) पनि भनिन्छ । कपिलसांख्यको मत र बुद्धदर्शनको मत सारमा मिल्छ । गीतामा सांख्य मतका आधार बताइएका २५ तत्त्व निम्नलिखित छन्–
क) १.मूल प्रकृति वा पुरुष,
ख) २. बुद्धि,
ग) ३. अहंकार,
घ) पांच ज्ञानेन्द्रिय– ४.इन्द्रिय, ५.आंखा, ६.कान, ७.नाक, ८.जिब्रो, ९.छाला,
ङ) पांच कर्मेन्द्रिय– १०.मुख, ११.हात, १२.खुट्टा, १३.जननेन्द्रिय (उपस्थ), १४.उत्सर्जन इन्द्रिय (गुदा),
च) पांच ज्ञानेन्द्रियका पांच विषय, १५.रुप, १६.शब्द, १७.गन्ध, १८.रस, १९.स्पर्श, छ) २०. मन (यी सबै इन्द्रियभन्दा माथि),
ज) पांच स्थूलभूत वा महाभूत वा तत्त्व– २१.भूमि, २२.आकाश, २३.वायु, २४.अग्नि, र २५.नीर ।
गीतामा प्रकृतिलाई जड तर सक्रिय मानिएको छ । पुरुषलाई साक्षी चेतन भनिएको छ । केवल विश्व ब्रह्माण्डको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ । तर जड प्रकृति र चेतन पुरुष दुवैको संयोग नभइ केही पनि हुन सक्दैन भन्ने मानिएको छ । यस अवधारणालाई आधुनिक विज्ञानको पदार्थ र ऊर्जा यी दुइ अवधारणाको व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको छ । भौतिक वैज्ञानिक ब्रायन डेभिड जोसेफ्सनका अनुसार– वेदान्त र सांख्यद्वारा नै क्वान्टम सिद्धान्त व्याख्या गर्न सकिन्छ । किनभने यी दुइ सिद्धँन्तले मात्र मस्तिष्क र विचारको नियम दिन्छन् । क्वान्टमको अर्थ यस्तो कुरा हो जुन आधा पदार्थ र आधा तरंग (ऊर्जा) हो ।
परमाणु वैज्ञानिक नील बोहरले परमाणु विज्ञानका गूढ रहस्य पत्ता लागउन उपनिषद अध्ययन गर्थे । उनले भनेका छन्– मलाई जब जब शंका लाग्छ । अरु समाधान पाईंदैन । अनि उपनिषद् खोलेर पढ्छु ।
सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्री ज्याक सर्फातीका अनुसार– सृष्टिको आधार स्पष्ट बुझाउन सांख्य बाहेक अरु कुनै सिद्धान्तले सक्दैन ।
गीतामा कुनै घटनाको कारण र परिणामको सम्बन्धको वैज्ञानिक व्याख्या छ । तर त्यसमा एउटा मान्यता के गरिएको छ भने एउटा अज्ञात तत्त्व अवश्य रहन्छ । जति धेरै कुरा जाने पनि एउटा कुरा फेरि पनि अज्ञात रहन जानेछ । जतिसुकै ठूलो वैज्ञानिक व्याख्या गरिए तापनि केही कमी रहन जान्छ । हिजोका वैज्ञानिक तथ्य आज त्रुटिपूर्ण भएका छन् । आज वैज्ञानिक भनिएको व्याख्या भविष्यमा यसै अज्ञात तत्त्वले गर्दा कुन रुपमा प्रस्तुत हुन जाने हो ? कसले भन्न सक्छ । त्यसैले आज असत्यीकरणको सिद्धान्तलाई दार्शनिकहरुले स्वीकार गर्छन् । भगवान् श्रीकृष्णको गीता व्याख्या आधुनिकतम विज्ञानको पनि व्याख्या हो । भविष्यका लागि पनि यसमा स्थान छ ।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि मामकम् ।।२०।।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ।।२१।।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२।।
जुन ज्ञानले सबै प्राणीहरुमा एक अविनाशी भावलाई अविभक्त (एक नास) छ भन्ने बुझिन्छ, त्यो ज्ञानलाई सात्त्विक जान ।।२०।।
तर जुन ज्ञानले सबै प्राणीमा भिन्न भिन्न प्रकारका भाव अलग अलग छ भन्ने बुझिन्छ, त्यस ज्ञानलाई राजस बुझ ।।२१।।
तर जुन ज्ञानले बिना कारण (अहैतुक), अयथार्थलाई यही सम्पूर्ण (कृत्स्न) हो भनेर एउटै (अल्प) कुरामा आसक्ति (ढिपी) गर्दछ । त्यो तामस ज्ञानको उदाहरण हो ।।२२।।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ।।२३।।
क्रियते बुहलायासं तद्राजसमुदाहृतम्।।२४।।
मोहादारम्भयते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।।२५।।
शास्त्रविधि अनुसार, आसक्तिरहित, फलको चाहना नगरिकन, रागद्वेष मुक्त भएर गरिएको कर्मलाई सात्त्विक भनिन्छ ।।२३।।
जुन कर्म कामनायुक्त अर्थात् भोगको चाहनाले वा अहंकारसहित गरिन्छ । अनि त्यो परिश्रम साध्य (असहज) छ, भने त्यो राजस कर्मको उदाहरण हो ।।२४।।
जुन कर्म परिणाममा बन्धनकारक (फंसाउने) र हानिकारक हुन्छ । हिंसा, र सामथ्र्य विचार नगरिकन केवल मोहवश आरम्भ गरिन्छ, त्यस कर्मलाई तामस भनिन्छ ।।२५।।
मुक्तसंगोsनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्ध्यसिद्धयोर्निविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।।२६।।
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोsशुचिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।।२७।।
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोsलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ।।२८।।
आसक्तिबाट मुक्त, निरहंंकारी, धैर्यवान, उत्साही, कार्य सिद्ध हु“दा वा सिद्ध हुन नसक्दा निर्विकार रहने, र हर्ष शोक जस्ता कुराले अप्रभावित कर्तालाई सात्त्विक भनिन्छ ।।२६।।
आसक्ति राख्ने, कर्मको फल प्रति उत्सुक, लोभी, हिंसात्मक (दुख दिने भाव), अशुद्धाचारी, हर्ष र शोकले छिटो प्रभावित हुने कर्ता राजस हुन्छ ।।२७।।
ढंग नपुर्याइ काम गर्ने (अयुक्त), अटेरी (प्राकृत), ठाडो, मूर्ख, अरुले गरेको काम पनि बिगार्ने (नैष्कृतिक), अल्छी, हरेक कुरामा खोट देख्ने (विषादी), र दीर्घसूत्री (छिटो हुने कामलाई पनि ढिलो गर्ने) लाई तामस कर्ता भनिन्छ ।।२८।।
राम्ररी विचार गरिएको कामको बारेमा भनिन्छ– वेल बिगन इज हाफ डन । तर त्यो कर्म जुन परिणाम विचार नगरिकन गरिन्छ । आफुले गरेको काममा हिंसाको भावना, प्रतिक्रिया छ छैन भनेर विचार गरिंदैन । यो काम सुरु त गरियो, निरन्तर गरेर यसलाई पार लगाउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने कुराको विचार गरिंदैन । केवल मोहवश यसरी गरिएको कर्म तामस हुन्छ ।
एउटा निकै चल्तीको किस्सा छ– जर्मनीले एउटा नयां धातु पत्ता लगायो । त्यसको रौं बराबर पातलो तार बनायो । अनि त्यसमा केही सुधारको आग्रह गर्दै अमेरिकालाई पठाएछ । उसको के विचार थियो भने यसमा अब केही सुधार गर्न सकिंदैन ।
तर अमेरिकाले त्यस तार भित्र प्वाल बनाएर तारलाई नली बनाइदिएछ । अमेरिकाको प्रविधि त्यो भन्दा उन्नत ।
अनि त्यसमा थप सुधार गर्ने भन्ने अनुरोध साथ जापान पठाइएछ । जापानले त्यसमा सुधार गर्ने केही ठाउं देखेनछ । तर त्यसमा यति कुरा थपेछ– मेड इन जापान ।
जापानी मोटर गाडी प्रसिद्ध छन् तर गाडीको आविष्कार जापानले गरेको होइन । यी सब केवल मेड इन जापान हुन् ।
कुनै कर्ता बसी बसी जय खोज्ने हुन्छन् । केही नगर्ने । तर काम भयो भने त्यसको सफलतामा सबभन्दा बढी आफ्नो योगदान देख्ने । उखानै छ– काम गर्ने बा“दर पगरी गुथ्ने ढेढु । यस्ताले काम बिग्रेकोमा जिम्मा लिन मान्दैनन् । बिग्रेमा सबै अर्काको थाप्लोमा । चोट पाउने बेलामा यिनीहरुले भ्यागुतोलाई तेर्साउंछन् ।
सिद्धबाबा भर्तृहरिले तीन प्रकारका कर्ता बताएका छन्– निम्नश्रेणीको कर्ताले काम सुरु गर्नै अल्छी गर्छ । एकछिन पछि गर्छु । भोलि गर्छु । पर्सि गर्छु । आज करै सो कल कर, कल करै सो परसों । इतनी जल्दी क्यों करता है जब जीना है बरसों । कहिल्यै तात्दैन । मध्यम कोटिको कर्ताले कर्म त सुरु गर्छ । सुरु गर्दा उसलाई बडो जांगर चल्छ तर एक छिन पछि सबै हराउंछ । अलिकति बाधा व्यवधान आइपर्यो भने बीचमा नै छोडिदिन्छ । एक छिन तात्छ, दुध उम्लिए जस्तो । तर उत्तम कोटिको कर्ताले अनेक बाधा आइपरे पनि कामलाई निरन्तरता दिन्छ । टुङ्गोमा नपुर्याइकन आराम लिन्न । विस्तारै तातेको दुध कुराउनी भए जस्तै । गण्डकी जस्तै निरन्तर त्यस बेलासम्म बगिरहन्छ जबसम्म समुद्र भेटिंदैन । उसले बाटो फेर्न सक्छ । कुनै ठाउंमा अलमलिन सक्छ । कुनै ठाउंमा केही कदम फर्केर पनि हिंड्न सक्छ तर निरन्तरता रहन्छ । उत्तम कोटिका कर्तालाई हेरेर नै वेदले भनेको छ– चरैवेति, चरैवेति ।
बुद्धेर्भेदं धुतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।।२९।।
बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ।।३०।।
यया धर्मंमधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।।३१।।
सर्वान्विपरीतान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।।३२।।
हे धनञ्जय, बुद्धि, र धृति पनि गुण अनुसार तीन प्रकारका हुन्छन् । यी सबै, केही शेष नराखी, अलग अलग बताउंछु, सुन ।।२९।।
हे पार्थ, जुन बुद्धिले प्रवृत्ति र निवृत्ति, कर्तव्य र अकर्तव्य, भय र अभय, तथा बन्धन र मोक्षलाई यथार्थ जान्दछ, त्यो बुद्धि सात्त्विकी हो ।।३०।।
हे पार्थ, जुन बुद्धिले धर्म र अधर्म, कर्तव्य र अकर्तव्य त जान्दछ तर बिलकुल ठीक तरीकाले बुझ्दैन, त्यो बुद्धि राजसी हो ।।३१।।
तमोगुणले घेरिएको जुन (बुद्धि) ले अधर्मलाई धर्म मान्दछ र सबै कुरा विपरीत बुझ्दछ, हे पार्थ, त्यो बुद्धि तामसी हुन्छ ।।३२।।
योगनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी ।३३।
यया तु धर्मकामार्थन्धृत्या धारयतेsर्जुन ।
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४।।
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।।
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ।।३५।।
जुन अव्यभिचारिणी (निश्चयात्मिका) धारणाले मन, प्राण र इन्द्रियका (उच्छृङ्खल) क्रियाहरु स्थिर हुन जान्छ, हे पार्थ, त्यो धृति (धारणा शक्ति) सात्त्विकी हुन्छ ।।३३।।
हे अर्जुन, तर, जुन धारणाद्वारा अत्यन्त आसक्तिपूर्वक धर्म, अर्थ, र काम धारण गरिन्छ, त्यो धारणा शक्ति, हे पार्थ, राजसी हो ।।३४।।
जुन धृतिद्वारा, खराब बुद्धि मानिस निद्रा, भय, शोक, विषाद, तथा मद (दुव्यर्सन) लाई छोड्दैन । हे पार्थ, त्यो धृति तामसी हो ।।३५।।
एक परिवारमा तीन जना थिए । आमा, बाबु, र छोरो । गरीब थिए । दुखी थिए । त्यसैले केही प्राप्त गर्ने इच्छाले तीनवटैले तपस्या गरे । तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान्ले प्रकट भएर भन्नु भएछ, तिमीले चाहेको प्रत्येकको एक इच्छा पूरा हुने छ ।
भगवान् अन्तध्र्यान भए पछि सुरुमा आमाले त्यस भनाईको परीक्षा गर्न आफु भर्खरकी सुन्दरी हुन पाउं भन्ने कामना गरिछ । नभन्दै तुरुन्तै षोडसी भइछ । आफु सुन्दर भएकी त्यो युवती घर बाहिर जान थाली ।
पुरुषले सोध्यो– कहा“ जान थालेको ?
स्त्रीले भनी– म यति राम्री भएं । अब यो घर मेरो लायक रहेन । त्यसैले म यो घर छोडेर जान्छु ।
यति छिटै यस्तो परिवर्तन, पुरुषलाई रिस उठ्यो । भन्यो– सुंगुर्नी जस्ती...।
पुरुषको इच्छा प्रकट भयो । तत्काल त्यो महिला सुंगुर भइ ।
छोरोले यो सबै हेरिरहेको थियो । वरदानको यो दुर्दशाले दुखी भइरहेको थियो । अब एउटा वरदान मात्र बांकी रह्यो । अनि निराश भएर आफ्नो वरदान प्रयोग गर्यो– मेरी आमा जस्तो अघि थिइन् त्यस्तै भइ जाउन् ।
पुनः सुंगुर झुत्री आमामा रुपान्तरित भयो । तीनवटा वरदान पाएर पनि यथावत । त्यसैले ज्ञानीहरुले सांसारिक कुरा नमाग भन्छन् । सांसारिक अर्थात् सांसारिक शक्ति देखाउने कुरा । वरदान पाए । तर निरर्थक गुमाए । यस्तो ज्ञान तामसिक हो । संसारमा तामसिक ज्ञान बढी प्रयोग भइरहेको छ ।
भर्खर एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो । केही दिन अघि चितवनमा एउटा बस एक्सीडेन्ट भयो । केही यात्रुहरुको मृत्यु भयो । कोही घाइते भए । जब पुलिसले घटनाको बारेमा पत्ता लगायो सबै आश्चर्यचकित भए । उसको गाडी मालिकसंग झगडा परेको रहेछ । त्यो रिस पोख्यो गाडी एक्सीडेन्ट गराएर । परिणाम भोगे यात्रुले । उनीहरुलाई ड्राइभर र मालिकको झगडाको बारेमा केही थाहा थिएन ।
ज्ञान, बुद्धि, धृति, कर्ता र कर्मको सूक्ष्म व्याख्याद्वारा यी श्लोकहरुमा काग्निटिभ साइन्स (ज्ञानशास्त्र) को गहन विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैले गीता मनोविज्ञान हो ।
अभ्यासाsमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।।३६।।
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेद्रमृतोपमम् ।
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ।।३७।।
परिणामे विष्ममिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ।।३८।।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ।।३९।।
हे भरतश्रेष्ठ, तर, सुख पनि तीन प्रकारका हुन्छन्, सुन । जुन सुखमा अभ्यास (असल काम) द्वारा रमेपछि दुखको अन्त हुन्छ । जुन सुख सुरुमा विषतुल्य लागे पनि परिणाममा अमृततुल्य हुन्छ । र त्यसैले त्यो बुद्धिको आन्तरिक प्रसन्नताबाट उत्पन्न भएको छ । त्यो सात्त्विक हुन्छ ।।३६,३७।।
जुन सुख विषय र इन्द्रियको संयोगले गर्दा हुन्छ, त्यो सुख सुरुमा अमृततुल्य जस्तो लागे पनि परिणाममा विषतुल्य हुन्छ । त्यसलाई राजस सुख भनिन्छ ।।३८।।
त्यो सुख, जसले सुरुमा तथा अनुबन्धमा (फ“सेपछि) आत्मालाई मोहित गराई निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद गराउ“छ, त्यसलाई तामस भनिन्छ ।।३९।।
निश्चित रुपमा मानिसको सुख आवश्यकता पूर्तिसंग सम्बन्धित हुन्छ । इच्छा, क्रियाकलाप, अनि सन्तुष्टि यही मानव सुखको क्रियाकलाप चक्र हो । इच्छा अपूर्ण रहनु दुखको कारण हो । इच्छा पूरा हुनु सुखको मूल्याङ्कन हो । अर्को शब्दमा जब इच्छा समाप्त हुन्छन् अनि मात्र सन्तुष्टि वा सुख प्राप्त हुन्छ । तर के इच्छा समाप्त हुन्छन् ? हुंदैनन् ? मानवीय जीवनको वास्तविक सत्य के हो भने इच्छा अनन्त हुन्छन् र त्यसको तुलनामा सन्तुष्टि नगण्य हुन्छ । गणितको सामान्य ज्ञान राख्नेलाई पनि के थाहा छ भने अनन्तमा अति नगण्य घटाउ“दा अनन्त नै बांकी रहन्छ । सारांश के हो भने अनन्त इच्छा हुनु र नगण्य मात्र सन्तुष्ट हुनु भनेको सुख नभए बराबर हो । अत्यन्त संक्षेपमा भन्दा, सन्तुष्टि र इच्छा दुवैको सह–अस्तित्व हुन सक्दैन । इच्छा र सन्तुष्टि संगै छन् भने त्यो विरोधाभासी अवस्था हो । सात्त्विक सुखमा केही दुख हुन सक्छ । यदि यस्तो दुख सुरुमा भयो भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ । यो अवस्थालाई सुखको अवस्था नै मान्नु पर्छ । तर यी इच्छाहरु जन्मौं–जन्म पछ्याइ रहन्छन् । कबीरले भन्छन्– माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर । आशा तृष्णा नमरी, यह कह गया कबीर ।। त्यसैले इच्छाहरु सन्तुलित राख्नु पर्छ । अन्यथा कहिल्यै सुख प्राप्त हु“दैन ।
सुखको सम्बन्ध इन्द्रियसंग हुन्छ । दृश्य हेरेर, संगीत सुनेर, खस्रो चिल्लो स्पर्शद्वारा, स्वाद जिब्रोद्वारा जानिन्छ । त्यो अनुभव पनि सात्त्विक भए मन र प्राणलाई सुख दिने हुन्छ । कहिलेकाहीं इन्द्रियको वास्तविक गुणलाई दबाएर असुखलाई मानिसले सुखमा रुपान्तरित गरिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि बालकले पिरो खुर्सानी मनपराउंदैन । तर निरन्तर जिब्रोको स्वाद क्षमतालाई निमोठेर आफुलाई खुर्सानी नभए भान्सा नपस्ने बनाउनु राजस सुखको उदाहरण हो । जुन कुराले सुखको आभास मात्र दिन्छ, अर्थात् जुन सुख अनुभव गर्दा होश गुमाएको हुन्छ त्यो तामस हो ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावैर्गुणै ः ।।४१।।
प्रकृति तीन गुणहरुले युक्त हुन्छ । यी तीन गुणरहित कुनै पनि कुरा पृथिवी, आकाश वा देवताहरुमा पनि हुन सक्दैन ।।३९।।
(त्यसैले) हे परन्तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, र शूद स्वभाव्र पनि यी विभक्त गुणहले प्रभावित हुन्छन् ।।४१।।
शूरवीरता, तेज, धारणा शक्ति, दक्षता, युद्धको सामना गर्नु, दान दिनु अनि ईश्वर भाव, यी सबै क्षत्रियका स्वाभाविक गुण हुन् ।।४३।।
आआफ्ना कर्ममा राम्ररी लागेको मानिसले सिद्धि प्राप्त गर्छ । आफ्नो काममा लागेर नै सिद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो सुन ।।४५।।
वैदिक कालदेखि नै चिन्तकहरुले समाजको स्थिरता, उन्नति, र समन्वयका लागि वर्ण र आश्रमको अनुशासन र व्यवस्थालाई जरुरी मान्दछन् । किनभने यस व्यवस्थाबाट व्यक्ति र समाजले धर्म, अर्थ र कामको सन्तुलित प्राप्ति गर्छ । जसरी व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि आश्रम व्यवस्था आवश्यक छ, त्यसैगरी, उनीहरुले सामाजिक कल्याणका लागि वर्ण व्यवस्थालाई जरुरी बताएका छन् । वर्णको अर्थ हो– रंग । वर्ण व्यवस्थाको सबभन्दा नजीकको समानान्तर शब्द वर्ग विभाजन (क्लास डिभिजन) नै हो । यसका सामाजिक, आर्थिक प्रभाव हुन्छन् । वर्ण विभाजन श्रम विभाजनमा आधारित छ । जसमा वंशानुक्रम र वातावरणको अदु्भुत समन्वय पाइन्छ ।
समाजको उन्नतिका लागि प्लेटोले कल्पना गरेको आदर्श समाजको विवरणमा समाजको तीन विभाजन पाइन्छ– उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग । उच्च वर्गमा राजा, दार्शनिक र उच्च प्रशासक वर्ग, मध्यम वर्गमा सैनिक, रक्षक र सहायक वर्ग र निम्न वर्गमा कृषक, कारीगर र सेवक वर्ग राखिएको छ ।
मल्लकालमा नेपालले श्रम विभाजनबाट आर्थिक फाइदा पाएका ऐतिहासिक विवरण पाइन्छ । कुनै देशको अर्थव्यवस्था केही खास व्यक्ति र समुदायमा निर्भर हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरु पनि के मान्दछन् भने उद्यमी वर्गको विकास नभइकन कुनै देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । जापानमा सामुराइ, नेपालमा नेवार, भारतमा मारवाडी, अमेरिका र रुसमा यहुदी समुदाय त्यहा“को आर्थिक विकासको आधार हो । यो कुरा सबै देशका लागि सत्य छ । उनीहरुलाई पन्छाएर अर्थव्यवस्थाको व्याख्या गर्न सकिंदैन ।
वैदिक वाङ्मयको वर्णव्यवस्था अतीव निर्मल र पवित्रतम छ । त्यहां परस्पर भेदभाव, अवहेलना र घृणाको प्रवृत्ति पाईंदैन । एउटा परिवारका सदस्यहरुको सम्बन्धमा जस्तै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, र शूद्र यी चारै वर्णको एक अर्का प्रति घृणा, विद्वेष, असूया, अश्रद्धाको दृष्टि राख्ने चलन व्यवहारको कहीं कल्पना पनि छैन । चतुर्वर्णक समाज स्वच्छ, समुन्नत र गतिशील हुने कल्पना गरिएको छ । चारवटै वर्णलाई समाजरुपी गाडी चलाउने चार पाङ्ग्राको रुपमा कल्पना गरिएको छ । परस्पर आश्रित हुनुपर्ने स्थिति स्पष्ट रुपमा देखाइएको छ । वर्ण–व्यवस्था एक यस्तो व्यवस्था हो जसमा समाजको विशेषतालाई तिनीहरुको गुण र कार्यको आधारमा समान महत्त्व दिइएको छ । यसमा पेशागत विशिष्टताको आर्थिक विशेषता पाइन्छ तर यो ठूलो सानोको क्रम होइन ।
विभिन्न वर्णले पालना गर्नु पर्ने अलग–अलग नियमहरु बताइएको भए तापनि निम्नलिखित नौवटा नियम सबै वर्णले समानरुपले पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ– कसै प्रति क्रोध भाव नराख्नु, कसै प्रति विश्वासघात नगर्नु, बाह्य–आन्तरिक पवित्रता राख्नु, सरल भाव राख्नु, आफ्नो पत्नीको गर्भबाट सन्तान उत्पन्न गर्नु, कसैसंग द्रोह नगर्नु, धनको उपभोग गर्दा बा“डफा“ड गरी उपभोग गर्नु, क्षमा भाव राख्नु र भरण पोषण योग्य व्यक्तिहरुको पालन गर्नु । यसमा दशौं कर्म पनि थपिएको छ तर त्यो केवल ब्राह्मणहरुका लागि अनिवार्य छ र त्यो हो निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा लागि रहनु । यी दशवटा नियमहरु बाइबिलको टेन कमान्डमेन्टसंग मिल्छन् ।
यद्यपि अलग अलग वर्णलाई अलग अलग काम दिने दिने कुरा उल्लेख छ र यो उल्लेख सनातन परम्परा अनुसार गरिएको हो । तथापि त्यस बेला विभिन्न वर्णका मानिसहरुलाई एक अर्काको कार्य गर्न प्रतिबन्ध भने थिएन । यसको स्पष्ट उल्लेख महाभारत, शुक्रनीति र कौटिलीय अर्थशास्त्रमा पाइन्छ । ऋग्वेदमा त अझ स्पष्ट शब्दमा एक परिवारका चार जनाले चार प्रकारका काम गरेको कुरा उल्लेख छ ।
असुर गुरु शुक्रका अनुसार जुन राज्यमा मानिसहरुले स्वकर्म पालना गर्छन् । त्यो समाज चिरस्थायी रहन्छ । त्यसैले देशमा प्रचलित देश–धर्म, जाति–धर्म, कुल–धर्म, ऋषि मुनिहरु द्वारा बनाइएको धर्म, प्राचीन धर्म र नवीन धर्म, यी सबैको ज्ञान प्राप्त गरेर कल्याणकारी राज्यले यी सबैको रक्षा गर्नु पर्दछ । किनभने यसैबाट राज्य व्यवस्था र सामाजिक व्यवस्था दिगो रहन्छ, अन्यथा अराजकता र अशान्ति हुन्छ भन्ने शुक्रको मत रहेको छ । शुक्रनीति र पराशर स्मृतिमा भनिएको छ– वृत्तिका आधारमा सबैले अलग अलग कर्म गरे पनि कसैको पनि वृत्ति निन्दित हुंदैन अर्थात् सबै वर्ण बराबर सम्मानका अधिकारी छन् ।
विभिन्न वर्णका विभिन्न काम भए पनि सबै वर्ण एक अर्काको उन्नतिमा सहायक हुन्छन् भनिएको छ । आपसमा वैमनस्य भयो भने समाजमा ठूलो हानि हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट बताइएको छ । यसबाट प्राचीन चिन्तकहरुले वर्णाश्रमको स्थापना समाजमा समन्वय, अन्तर्निर्भरता, र आर्थिक उत्पादनका लागि गरेको स्पष्ट हुन्छ । यहा“निर स्मरणीय के भने स्वयं कृष्णको वृत्ति गोपालन हो । प्राचीन समाजदार्शनिकहरुले अध्ययनको सुविधाका लागि यस्तो विभाजन गरेका हुन् । विद्यालाई आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति भनिएको छ । पुरुषार्थलाई अर्थ, काम, धर्म, मोक्षमा र प्राणीलाई अण्डज, उद्भिज, जरायुज, र स्वेदजमा विभाजन गरिएको छ । यो विभाजन प्राविधिक हो, मर्यादाक्रम होइन ।
खप्तड बाबाले धर्मविज्ञान पुस्तकमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्– वर्ण व्यस्थालाई वंशानुक्रम र वातावरण दुवैका विशेषताहरुलाई समावेश गरिएको सामाजिक व्यवस्था हो । यो जातीय व्यवस्था होइन। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले समेत रक्तलाई र क्रोमोजोमलाई केवल चार भागमा नै विभाजन गर्दछ ।
कौटिलीय अर्थशास्त्रमा सामाजिक कल्याणलाई उच्च राख्नका लागि राज्यले समाजकोे यो व्यवस्थालाई बनाइराख्नु पर्दछ । स्वकर्म पालना गर्ने, गराउने राजाले यस लोक र परलोक दुवैमा आनन्द पाउ“छ । वर्ण र आश्रमको मर्यादा पालन गर्र्ने व्यवस्था कायम गरेर त्यसलाई पालन गर्ने, गराउने मानिस वेदमार्गबाट सुरक्षित भएर आनन्दसंग रहन्छ, कहिल्यै पदच्युत हु“दैन । कौटिलीय भनाई गीताकारको भनाईसंग मिल्छ ।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः यो वाक्यांशले के स्पष्ट हुन्छ भने उच्चता र श्रेष्ठता प्राप्त गर्न सबै वर्ण स्वतन्त्र छन् । सानो ठूलो कोही छैन ।
व्यक्तिगत सुख र सामाजिक कल्याणमा अन्तर्निभरताको व्याख्या गरिएकोले गीताशास्त्र सामाजिक शास्त्र हो ।
स्वकर्मणा तमभ्यच्र्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ।।४६।।
जुन (परमेश्वर) बाट, प्राणीहरुको उत्पत्ति भएको छ, र जसले, यो समस्त विश्वमा व्याप्त छ, त्यसलाई आफ्ना स्वाभाविक कर्मले अर्चना गर्दै मानिसले सिद्धि प्राप्त गर्छ ।
स्वामी रामकृष्णले आफ्ना भक्तहरुलाई भन्ने गर्नु हुन्थ्यो– भगवान्ले सद्बुद्धि नदिइकन केही पनि प्राप्त हु“दैन । सद्बुद्धि दिने पनि उनै हुन् । तिमीहरुले के सोच्दा हौ भने तिमीले ध्यान गर्नाले, पूजा गर्नाले, चिन्तन गर्नाले भगवान् प्राप्त हुन्छन् । तिम्रो इच्छा शक्ति पनि उनैको देन हो । सबै कुरा उनैलाई छोडी देउ । त्यही भएर वेदमा भनिएको छ– पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते...। रामकृष्णको भक्ति बडो अचम्मको थियो । उनले भन्थे– घुम्न जानु भनेको काली मन्दिरको परिक्रमा हो । खानु भनेको कालीलाई आहुति हो । एक दिन कालीलाई पशुबलि दिनेहरुलाई हेरेर उनी जोडले हांसे– हेर, हेर, कालीलाई, कालीले, कालीको बलि दिइरहेका छन् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम् ।।४७।।
राम्ररी लिइएको अरुको धर्मभन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नो धर्म श्रेष्ठ हुन्छ, स्वभाव नियत कर्म गर्दा किल्विष (त्रुटि, कमजोरी, दोष) हुंदैन ।
हिन्दु धर्मशास्त्रहरुले धर्म र सम्प्रदायमा थोरै अन्तर गरेका छन् । पूजा पद्धति भनेको सम्प्रदाय हो । तर धर्म भनेको आदर्श, अध्यात्म, व्यवस्था, कर्तव्य र पूजा पद्धति यी सबै हो । उदाहरणका लागि शैव, वैष्णव, शाक्त धर्मलाई समप्रदाय पनि भनिन्छ । तर वैदिक सनातन धर्मलाई सम्प्रदाय भनिंदैन । यस भित्र अनेक सम्प्रदाय छन् । रामकृष्ण मठबाट प्रकाशित पुस्तक अ प्राइमर टु हिन्दुइज्ममा डी एस शर्माले यी विषयहरुको सूक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । यो पुस्तक नेपालीमा हिन्दु धर्मको क ख ग नामले गीता समुदयबाट प्रकाशित छ ।
हाल विश्वका तीन प्राचीन धर्म हिन्दु, यहुदी, र जोरोस्टर हुन् । यी धर्महरुले आफ्नो धर्मको प्रचार पनि गर्दैनन् र धर्मान्तरण पनि गराउ“दैनन् । यिनीहरुबाट निस्केका धर्महरुले धर्म प्रचार पनि गर्छन् र धर्मान्तरण पनि गराउ“छन् । यहुदीबाट दुइ प्रमुख धर्महरु निस्केका छन्, क्रिस्तान, र इसलाम । क्रिस्तानका दुइ मुख्य हांगा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट छन् । इसलामका दुइ हांगा शिया र सुन्नी छन् । इसलाम धर्मको सुधारको रुपमा बहाई सम्प्रदायका सदस्यहरु पनि छन् । जोरोस्टर धर्मको अवशेषका रुपमा केही मानिसहरु अब ईरानमा छन् । ईरान नै जोरोस्टरको जन्मभूमि हो तर ईरानको जनसंख्या धर्मान्तरित भइ अब त्यहांको राजधर्म शिया इसलाम भए पछि यो धर्म त्यहां पिछडिएको छ । भारतमा भएको जोरोस्टर मतावलम्बीहरुको संख्या पनि निरन्तर घट्दो छ । अन्य धर्मावलम्बीसंग विवाह गर्नेहरुले आफ्नो परम्परा छोड्दै छन् भने जो आफ्नै संस्कृति परम्पराका पालक छन् उनीहरुको ढीलो विवाह, जीविकोपार्जनका समस्या जस्ता कारणले जन्मदरमा निरन्तर कमी आएको छ । जापान, चीन आदि पूर्वी देशहरुमा ताओ, शिन्तो, कम्फ्युशियस धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलनमा छन् ।
हिन्दुबाट निस्केका धर्म सम्प्रदायहरुमा बौद्ध, जैन, सिख प्रमुख छन् । नेपालमा पहिले किरांत धर्मावलम्बीहरुले आफुलाई हिन्दु मानेका थिए । विगतका दुइवटा जनगणनाहरुमा उनीहरुले आफ्नो छुट्टै पहिचान देखाएका छन् । बोन मतावलम्बीहरु पनि आफुलाई छुट्टै प्रस्तुत गर्न चाहिरहेका छन् । फरक छ भने हिन्दुहरु अनेक देवदेवी, अनेक पूजा पद्धतिमा विश्वास गर्छन् । यसका अनेक प्रवत्र्तक छन् । सबै साना ठूला नदीहरु विशाल हिन्दु धर्ममा आएर मिल्छन् । हिन्दुहरुले आफु भित्र वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, किरात यी सबैको अनुभूति गर्छन् । हिन्दु दर्शन एक यस्तो दर्शन हो जसभित्र नास्तिक दर्शनलाई पनि सम्मानजनक स्थान छ । हिन्दु धर्मरुपी विशाल वृक्षका यी हांगाहरु हुन् । धेरै टाढा पुगेको हांगो आफ्नो मूलभन्दा फरक देखिन्छ । त्यही सम्बन्ध हिन्दु धर्म र अरु धर्ममा छ । यस विशालतालाई अनुभव गर्दै ओशो सिद्धार्थले भनेका थिए– नेपाल हिन्दु राष्ट्रको रुपमा पनि धर्म निरपेक्ष नै थियो । वेद निन्दकलाई नास्तिक मानेपनि गौतम बुद्धलाई अनार्य भनिंदैन । स्वयं बुद्धले पनि आफ्नो ज्ञानलाई सनातन धर्म (एस धम्मो सनन्तनो) भनेका छन् । हिन्दुहरुले बुद्धलाई मात्र होइन बुद्धकी आमाको पनि पूजा गर्छन् ।
हिन्दु सभ्यताको मूल भाषा संस्कृतमा अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान र विज्ञानका क्षेत्रमा हजारौं ग्रन्थ उपलब्ध छन् । धर्मशास्त्र, र अर्थशास्त्र मात्र होइन कामशास्त्रका दर्जनौं उत्कृष्ट ग्रन्थ सनातन परम्पराका सम्पत्ति हुन् । तर हिन्दुहरुको पवित्रतम ग्रन्थ हो वेद । यो ज्ञानको प्राचीनतम सभ्यताको एक मात्र उपलब्ध अभिलेख हो । वेदमा भएका कुराहरु हजारौं वर्षसम्म मौखिक (श्रुति) परम्परामा चलिआएका थिए । यो ज्ञानको कति पुरानो अभिव्यक्ति हो भने यसको मूल पत्ता लगाउन गाह्रो छ । त्यसैले यसको नाम अपौरुषेय भयो । जसले यसलाई अनुभव गर्यो उसले अकृत्रिम अनुभवद्वारा नै प्रस्तुत गर्यो त्यसैले यसको रचयितालाई मन्त्रदृष्टा भनिन्छ ।
ऋग्वेदका मन्त्रहरुमा गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, कक्षिवती, यमी, इन्द्रायणी आदि ३० वटा ऋषिकाहरु (महिला मन्त्र रचयिताहरु) का मन्त्र पाइन्छन । वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, अगस्त्य, कण्व, गर्ग, अत्रि, गृत्समद आदि ४०० ऋषिहरुको नाम मन्त्रका साथ सुरक्षित छन् । तर हजारौं मन्त्रहरु लोप भइसकेका छन् । विश्वको सबै प्रमुख सभ्यताहरुका मूल कुराहरु वेदमा प्राप्त हुन्छन् । वेदका प्राथमिक ऋचा कम्तीमा १०,००० वर्ष अघि तयार भएको अनुमान छ । ऋग्वेदलाई संरासंको संस्था यूनेस्कोले वि.सं.२०६४ मा विश्व सांस्कृतिक सम्पदा सूची (मेमोरी अफ् द वल्र्ड रजिस्टर) मा वल्र्ड कल्चरल हेरिटेजको रुपमा सूचीकृत गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिसकेको छ । वेदको वाजसनेयी परम्पराको हस्तलिखित ग्रन्थ नेपालमा सुरक्षित रहेका छन् । यसलाई ११ औं शताब्दीको मानिएको छ । यस भन्दा प्राचीन अभिलेख हालसम्म पाइएको छैन । यस बाहेक वाल्मीकि रामायण र आयुर्वेदको ग्रन्थ सुश्रुत संहिताको सबभन्दा प्राचीन हस्तलिपि समेत नेपालमा छ । हिन्दु शास्त्रका अनेकौं प्राचीन पाण्डुलिपि सुरक्षित राख्न सक्ने विश्वमा नेपाल मात्र भएको छ । यसको एक मात्र कारण यो देश हिन्दु राष्ट्र भएर हो भन्ने बाहेक अर्को कुनै तर्क देखिंदैन । आज विकास भएका धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्र, आयुर्वेद, भौतिक विज्ञान र इञ्जिनीयरिंग विषयका आधारभूत अवधारणाहरु ऋग्वेदमा पाइन्छन् ।
कुनै बेला एशिया महाद्वीपको प्रंमुख सभ्यता र संस्कृति थियो हिन्दु सभ्यता । ईरान, ईराक मात्र होइन टर्कीको राजधानी अंकारासम्म आर्यधर्मको प्रतिष्ठा थियो । पुरातात्त्विक अवशेषहरुमा त्यहांका निवासीहरु आर्य सभ्यता र संस्कृतिका अनुयायी थिए भन्ने प्रमाणहरु फेला परेका छन् । अंकारामा पहिले हिटाइट र मिटानीज सभ्यताका दुइ शिलालेख प्राप्त भएका छन् । जसमा के उल्लेख छ भने विवाहका अवसरमा नव दम्पत्तिलाई आशीर्वाद प्रदान गर्न पांच देवताहरु– इन्द्र, वरुण, मित्र र अश्विनी कुमारहरुलाई आह्वान गरिन्थ्यो । आर्य देवताहरुको पूजा त्यस समस्त प्रदेश र एशिया माइनरमा हुने गरेका अन्य अनेकौं प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।
कम्पूचियामा हिन्दु देवदेवीहरुका ठुल्ठूला मूर्ति र मन्दिरका अवशेषहरु पाइन्छन् । अफगानिस्तानमा शिव मन्दिरका अवशेष पाइन्छन् । पेशावरको पुरानो नाम पुरुषपुर र कन्दहार भनेको गान्धार हो ।
प्राचीनकालमा यो संस्कृति कति विकसित र उच्च थियो भन्ने कुराको अनुमान कुन कुराले पनि गर्न सकिन्छ भने तक्षशिला र नालन्दा जस्ता विश्वविद्यालयहरुमा संस्कृत भाषा तथा हिन्दु र बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न ग्रीस र चीनबाट वर्षेनी थुप्रै मेधावी विद्यार्थीहरु आउने गंर्थे ।
सबै धर्महरुको उत्पत्ति एशिया नै हो तर दक्षिण एशियामा हिन्दु, र बौद्ध, पूर्व एशियामा बौद्ध र इसलाम, र पश्चिम एशियामा इसलामको पूजा पद्धतिहरु लोकप्रिय भए भने युरोप र अमेरिका क्रिस्तानले बढी प्रभाव पार्यो । क्रिस्तानको प्रचार हुनु अघि युरोप र अमेरिकामा प्राचीन संस्कृतिहरु थिए । युरोप भर रोमन देवी देवताहरुको पूजा हुन्थ्यो । युरोपमा लगभग ५० प्रकारका संस्कृति थिए । धार्मिक प्रचारले गर्दा विश्वमा अनेक जनजातिगत संस्कृतिहरु लोप भएका छन् । अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, ल्याटिन अमेरिका लगायतका कैयौं सभ्यताहरु हराइसकेका छन् । कोही हराउने क्रममा छन् । साथै केही नयां सभ्यताहरु पनि निर्माण भइरहेका छन् । क्रिस्तान र इसलाम धर्मका नयां सुधारिएका स्वरुपहरु विकसित भइरहेका छन् तर त्यसको संख्या अहिले ज्यादै कम छ । तर गीताका स्वधर्मको अर्थ हिन्दु धर्म होइन । गीता जुनसुकै धर्म सम्प्रदायका लागि पठनीय छ । यसमा समप्रदाय, जाति, वर्ण र लिंगको कुनै प्रतिबन्ध छैन । सबैले आआफ्नो योग्यता र रुचि अनुसार सामग्री प्राप्त गर्न सक्छन् । आजभन्दा ५५०० वर्ष अघि, जुन बेला गीता उपदेश भएको हो, त्यस बेला संसारमा अनेक प्रकारका धर्म सम्प्रदाय थिएनन् । गीताको स्वधर्म भनेको सहज कर्म हो । प्रत्येक व्यक्ति आआफ्ना गुण अनुसार फरक हुन्छ । उसको जुन गुण छ । जुन विशेषता छ । त्यही अनुसार काम गर्नु स्वधर्म भनिएको छ । बिलगेट्सले स्वधर्मका सम्बन्धमा भनेका छन्– मसंगै पढ्ने साथीहरु सबै पास भए । म फेल भएं । अहिले ती सबै साथी मेरो कम्पनीमा इञ्जीनियर छन् । उनलाई पढ्नमा रुचि थिएन । कम्प्युटरमा रुचि थियो । त्यसको विकास गरे । पढ्नमा जबरजस्ती गरेको भए के हुन्थ्यो ? बढीमा उनी त्यस्तै कुनै कम्पनीमा इञ्जीनियर हुन्थे । स्टीभ जब्सले पनि आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाउन सकेनन् । उनले त सबैलाई एउटै सन्देश दिंदै हिंड्छन्– स्टे हङ्ग्री, स्टे फुलिस ।
मेरो एक जना मित्र जो अलि सोझो थियो सुरक्षा निकायमा भर्ती भयो । तर रिटायर्ड हुञ्जेलसम्म अलिकति पनि पदोन्नति प्राप्त गर्न सकेन । अर्धविक्षिप्त भएर रिटायर भयो । एक दिन भन्छ– मैले गलत पेशा रोजें । मनमा अशान्ति र असुरक्षाले गर्दा राम्रोसंग गर्न सकीनं । मैले शिक्षण पेशा रोज्नु पर्ने । कम्तीमा आनन्दको अनुभव त गर्थें । प्रत्येक व्यक्तिले यस्तो स्वधर्म बुझेर पेशा रोज्नु पर्छ । अन्यथा धन र मान जति राम्रो काम भए पनि अर्काको अभिनय गरे सरह हुन्छ ।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्येत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।।४८।।
हे कौन्तेय, दोषयुक्त हुंदा पनि सहज कर्म त्याग गर्नु हुंदैन । किनभने धुवांले आगो ढाके जस्तो सबै काममा केही न केही दोष भइहाल्छ ।
श्वेताम्बर तेरापन्थी जैन सन्तहरुले सेतो कपडाले मुख छोप्छन् । उनीहरु भन्छन्– सांस फेर्दा पनि हिंसा हुन सक्छ । सही कुरा पनि व्यक्त गर्दा दोषपूर्ण हुनसक्छ । सुन्दरता हेरेर र स्वाद चाखेर अनुभव गरिन्छ । यी दुवै कुरालाई अभिव्यक्त गरियो भने दोष हुन जान्छ । तर्कारी, अचार, र मिठाई चाख्नेले मीठो भयो भन्छ । तर प्रत्येकको मीठोपनलाई सही रुपमा केवल चाख्नेले मात्र अनुभव गर्न सक्छ । बोल्नेले जे बोले पनि सुन्नेले गर्दा अर्थमा दोष उत्पन्न हुन जान्छ । कुनै कविको कविताका अनेक अर्थ लगाउने हुन्छन् । अनेक व्याख्या हुन्छन् । कबीरले कविता रचे–
गुरु गोविन्द दोउ खडे, काके लागुं पायं ।
बलिहारी गुरु आपने गाविन्द दियो बतायं ।
गुरु ठूलो कि गोविन्द यस कविताबाट स्पष्ट नै हुंदैन । अर्थ नाना थरी छन् । असली अर्थ त केवल त्यस कबीरलाई मात्र थाहा होला । अरुले बोलेको कुराको ठीक अर्थ के हो कसले त्यसको शत प्रतिशत वास्तविकता पत्ता लगाउने ? ....
पति पत्नीले झगडा गरे ।
पति– हे भगवान्, यस जीवनबाट म दिक्क परिसकें । मलाई लैजाउ प्रभु ।
पत्नी– हे भगवान्, मेरो पतिलाईभन्दा पहिला तिमीले मैलाई लैजाउ ।
पति– हस् भगवान्, पहिला उसैको कुरा सुन्नुस् ।
सबैका स्वधर्म फरक हुन्छन् । सबै कर्म दोषपूर्ण हुन्छन् ।
गीताले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ सहज कर्म नै स्वधर्म हो । त्यसैले यो व्यक्तिगत हुन्छ । तर पूजा पद्धति व्यक्तिगत होइन यो त जहिले पनि सामूहिक हुन्छ ।
नैष्कम्र्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति ।।४९।।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।।५०।।
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ।।५१।।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः।।५२।।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।५३।।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ।।५४।।
सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिभएको, मनलाई नियन्त्रणमा राख्ने, र तृष्णारहित (योगी) ले सन्न्यासद्वारा परम नैष्कम्र्यसिद्ध प्राप्त गर्छ ।।४९।।
त्यस नैष्कम्र्यसिद्धिलाई प्राप्त गरेर मानिसले ब्रह्म–भावलाई कसरी प्राप्त गर्छ, हे कौन्तेय, त्यसलाई संक्षेपमा मबाट बुझ । (किनभने) यो ज्ञानको सर्वश्रेष्ठ अवस्था (परा–निष्ठा) हो ।।५०।।
विशुद्ध बुद्धिले युक्त लघु आशी– थोरै (खाना, आराम, रहनसहन) ले पुग्ने, शब्दादि विषयको त्याग, सात्त्विक धृति भएको, अन्तःकरणलाई संयम गरेर मन, वचन, कर्मलाई वशमा राखेको, मनमा
रागद्वेष नभएको, वैराग्यलाई आश्रय लिएको (अर्थात् कसैको सहारा नलिएको), अहंकार, हठ, घमण्ड, काम क्रोध, र परिग्रहलाई त्यागेर (निरन्तर ध्यानयोगका परायण रहने, ममतारहित), शान्त योगीले ब्रह्मभाव प्राप्त गर्छ ।।५१–५३।।
ब्रह्ममा एकीभाव भएको, प्रसन्नचित्त योगीले (नष्टको) शोक गर्दैन, (अप्राप्तको) आकांक्षा गर्दैन । सबै प्राणीमा समभाव भएकोले उसले मेरो परा भक्ति प्राप्त गर्छ ।
ब्रह्मभूत भनेको ब्रह्मस्वरुप, ब्रह्मभाव प्राप्त योगी । यस भावका बारेमा गीतामा यस अघि पनि बताइएको छ । जे पाए पछि अरु केही चाहिंदैन । यस्तो अवस्था जब उसलाई ठुल्ठूला दुखले अलिकति पनि विचलित गर्न सक्दैन । अध्याय ६.२२ । स्वामी रामकृष्णले ब्रह्मभावको अवस्थालाई तुलना गर्दै भनेका छन्– आनन्द तीन प्रकारका हुन्छन्– विषयानन्द, भजनानन्द, र ब्रह्मानन्द । ब्रह्मानन्द प्राप्तलाई अन्य कुनै पनि आनन्द तुच्छ हुन्छ । उपनिषद्हरुमा यिनै कुराहरु बारम्बार भनिएको छ ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ।।५५।।
भक्तिद्वारा मलाई, जेजस्तो छु, तत्त्वले जान्दछ, त्यस भक्तिद्वारा मलाई ठीक–ठीक जाने पछि ममा प्रवेश गर्छ । (विशका धेरै अर्थ हुन्छन्, यसका आधारमा प्रविश, निविश, इत्यादि शब्द बनेका छन् । सारांश के हो भने मेरो निरन्तर चिन्तन गर्दै म जस्तै हुन्छ ।)
जे छु, जस्तो छु र जति छु यसलाई तत्त्वले जान्दछ । कसैले पा“च तत्त्व भन्दछन् । कसैले पच्चीस तत्त्व भन्दछन् । कसैले चौबीस तत्त्व भन्दछन् । पा“च तत्त्व अर्थात् भूमिको भ, गगनको ग, वायुको व अग्निको अ र नीर को न नै भगवान हो । यी पञ्च तत्त्वका साथमा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, विषय, मन, प्रकृति, पुरुष आदि २५ तत्त्वलाई तत्त्व भन्दछन् । तर भगवान् श्रीकृष्णका अनुसार केवल एक तत्त्व छ सुप्रीम तत्त्व । त्यो हो परमात्मा । त्यसबाट यी अरु तत्त्व उत्पन्न भए । त्यसलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ । शून्य वा परम । भौतिक–शास्त्री र ब्रह्माण्ड विज्ञानका विशेषज्ञ स्टीफेन हकिङ्सले पनि शून्य तत्त्वबाट सबै उत्पत्ति भएको मान्दछन् । त्यो शून्य भनेको र उपनिषद्हरुमा भनिएको परमशून्य, आकाश पनि अटाउने, एउटै हो ।
तत्त्वले जान्नु भनेको के हो ? स्वामी रामकृष्ण, जसले सबै प्रकारका साधना गरेका थिए । उनले भनेका छन्– पूर्णज्ञान र पूर्णभक्ति एउटै हो । पराभक्तिले जुन अवस्था प्राप्त हुन्छ, पूर्णज्ञानको अवस्था पनि त्यही हो । त्यसैले तत्त्वज्ञान र आत्मज्ञानको निष्कर्ष एउटै हुन्छ । तत् भनेको परमात्मा, त्वं भनेको जीवात्मा । यी एउटै हुन् भनेर जान्नु ।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय ः।।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्तं पदमव्ययम् ।।५६।।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव ।।५७।।
ममा राम्ररी आश्रित हुनेलाई सारा कर्महरु गर्दै पनि मेरो कृपाले शाश्वत र अव्यय परमपद प्राप्त हुन्छ ।।५६।।
(त्यसैले) सारा कर्म मनले ममा अर्पण गर्दै बुद्धि योगको आश्रित भइ मेरो चिन्तन र परायण गर्ने होउ ।।५७।।
यी श्लोकहरु शरणागतिसंग सम्बन्धित छन् । स्वामी रँमसुखदासले एक मात्र साधना बताएका छन्– शरणागति । प्रतिक्षण ईश्वरको सम्झना । सबै उसलाई छोडिदिने हो भने अरु केही गर्नै पर्दैन । दुई प्रकारको शरणागति छन् । एक बा“दरको पाठो जस्तो । अर्को बिरालाको न्याउरो जस्तो । बा“दरका पाठापाठीले आफ्नो आमालाई कसेर समाएका हुन्छन् । अर्कोतिर न्याउरोले केही पनि गर्दैन । आंखा खुलेका पनि हुंदैनन् । आफैलाई पनि समाउन नसक्ने हुन्छ । नेपालीमा त्यसैले सारै लाचारलाई निन्याउरो भनिन्छ । न्याउरो सुतेर ङ्याउ“ङ्याउ“ रोइरहन्छ । उ रोएको सुनेपछि बिरालोलाई खपिनसक्नु हुन्छ र आएर समाउ“छ । भक्ति कि त बा“दरका पाठाको जस्तो गर्नु कि न्याउराको जस्तो । कि ईश्वरलाई नछोड्ने गरी समाउनु, कि केही नसमाउनु सबै उसैलाई छोडिदिनु ।
मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।।५८।।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।।५९।।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यवशोद्रपि तत् ।।६०।।
ममा चित्त भएको तिमी मेरो प्रसादले सबै संकटहरु सजिलै पार हुनेछौ । र यदि अहंकारले मैले भनेको सुन्दैनौ भने विनष्ट हुनेछौ ।५८।।
जुन अहंकारलाई लिएर मैले युद्ध गर्दिन, यस्तो निश्चय गर्छौ भने तिम्रो त्यो मान्यता मिथ्या हो । किनभने तिम्रो स्वभावले तिमीलाई युद्धमा नियोजित गर्नेछ ।।५९।।
हे कौन्तेय, जुन कर्मलाई मोहका कारण गर्न चह“दैनौ, त्यसलाई पनि आफ्नो स्वभावले बांधिएर परवश भइ गर्नेछौ ।।६०।।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेद्रर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ।।६१।।
तत्प्रसात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ।।६२।।
अर्जुन, शरीर यन्त्रमा आरुढ ईश्वर सारा प्राणीहरुलाई आफ्नो मायाले उनको कर्म अनुसार घुमाउ“दै सबै प्राणीहरुको हृदयमा बसेको छ ।।६१।।
हे भारत, सबै प्रकारले त्यस परमेश्वरको शरणमा जाउ । त्यस परमात्माको कृपाले परम् शान्ति तथा शाश्वत स्थान प्राप्त गर्नेछौ ।।६२।।
सन्त पुरुषहरुले गृहस्थलाई भन्ने गरेका छन्– एक हातले भगवान्को चरण समाई राख र एक हातले संसार समाइ राख । जुन बेला तिमीलाई संसारका कामले अलिकति फुर्सत हुन्छ, तुरुन्तै दुवै हातले परमात्माका चरण समाउ । यही हो अँध्यात्मिक गृहस्थका जीवनको सूत्र । पं नारायण प्रसाद पोखरेलले भजन गाउने गर्थे– कहिले नभुलौं, कहिले नभुलौं, हातमा काम मुखमा राम कहिले नभुलौं ।
विमृश्यैतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।।६३।।
यो गोप्यभन्दा पनि गोप्य ज्ञान मैले तिमीले भनें । यसलाई राम्ररी विचार गरेर जे ठीक लाग्छ, त्यही गर ।
एउटा उखान छ– उचालेको बाघले मृग मार्न सक्दैन । बाघलाई शिकार गर्न सिकाउन सकिन्छ तर मृगलाई मार्न उसैको पञ्जा समातेर हिर्काउने काम गर्न सकिन्न । उसले आफैं भित्रैबाट बल गर्नु पर्छ । चिकित्सकहरुले के मान्दछन् भने गर्भ बाहिर आउन स्वयं बालकले पनि पर्याप्त बल गर्नु पर्छ । माताको प्रयासले मात्र बालक बाहिर आउन सक्दैन । यी नियम सिकाइमा पनि लागू हुन्छन् । शिष्यलाई जति सुकै प्रशिक्षण दिए पनि शिष्य स्वयं आफैंले मेहनत गर्नु जरुरी हुन्छ । माउले बचेराका प्वांख केही ठूला भए पछि गु“डबाट घुचेटिदिन्छ । उसले आफ्ना बचेरालाई अत्याचार गरेको होइन । घुचेटेपछि बाध्य भएर बचेरोले उडन सिक्छ । उड्न सिकाउने तरिका यही मात्र हो । अब भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई त्यही गर्न थाल्नु भएको छ । जे इच्छा लाग्छ त्यही गर । मैले भनेर होइन अब आफ्नै इच्छाले युद्ध गर्ने हो । आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो । आदेश मान्ने होइन ।
बचेरोलाई खुल्ला आकाशमा नछोडिकन उसको व्यक्तित्व विकसित हुनसक्दैन । मानिसको खुल्ला आकाश भनेकै जीवनमा अज्ञातको जोखिम मोल्नु हो ।
आधुनिक चिन्तकहरुले यस कुरालाई स्टे हङ्ग्री, स्टे फुलिस, लिभ डेन्जेरसली जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेका छन् ।
परम वचन– शरणं व्रज
सर्वगुह्यतमं भूयः शृुणु मे परमं वचः ।
इष्टोsसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ।।६४।।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोsसि मे ।।६५।।
अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।६६।।
यस्तो अति गोपनीय मेरा परम वचनलाई फेरि सुन । मेरो अतिशय प्रिय छौ, त्यसैले अति हितकारी कुरा तिमीलाई प्रदान गर्छु ।।६४।।
मन्मना होउ । मलाई मन (ध्यान) देउ । मद् भक्त– मेरो भक्त बन । मद् याजी– मेरो यजन गर । मलाई प्रणाम गर (मनमा सम्मानको भाव राख) । अनि मलाई नै प्राप्त हुने छौ (मभित्र भएका ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ)। तिमीलाई मैले के सत्य प्रतिज्ञा भनेको छु भने तिमी मलाई अति प्रिय छौ ।।६५।।
सारा धर्म, कर्तव्य, कर्म, अधिकार, कर्तव्य, त्याग गरेर तिमी केवल एक मेरो शरणमा आउ । मैले नै सारा पापहरुबाट तिमीलाई मुक्त गरीदिने छु ।।६६।।
परमं वचः अर्थात् सामान्य वचन होइन । अन्तिम र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण । अहिलेसम्म जे भनें त्यसभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण । आफ्नो सबभन्दा प्रियलाई अभिभावकले अन्तिममा समझाउने कुरा के हो ? त्यही, परम वचन । अभिभावकको अन्तिम भनाई हुन्छ– राम्रो तरीकाले त्यो काम सम्पन्न गर्नु । नसक्ने भएमा मलाई सोध्नु । मलाई भन्नु ।
गुरुसंग ज्ञान हासिल गर्नु छ, केही सिक्नु छ भने पेडागोजी जति सुकै वैज्ञानिक भए पनि काम लाग्दैन । हरेक शिष्यका लागि यो नै गोपनीय कुरा हो । यो मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यो के भने गुरु प्रति पूर्ण समर्पण भाव हुनुपर्छ । गुरु प्रति श्रद्धाभाव छैन भने शिष्यले केही सिक्न सक्दैन । यही परम वचन हो । यसभन्दा अर्को परम वचन हुन सक्दैन ।
म तपाईंको शिष्य भएं, मलाई परम श्रेय बताउनुहोस (गीता ३.२) । र तपाईंका शरण परें मेरो उद्धार गर्नुहोस्– शाधि मां त्वां प्रपन्नम् (गीता २.७) भने पछि मात्र गीता सुरु भएको कुरालाई पनि यस सन्भर्दमा ध्यानमा राख्नु पर्छ । यदि कसैले म शिष्य भएं भन्छ भनेर स्वीकार गर्छ भने त्यसका लागि परम वचन हो यो । त्यो के भने मलाई पूर्ण समर्पण गर । यो नै गुह्य कुरा हो । यो गोप्य किन हो भने यसको मर्म त्यस बेलासम्म थाहा हु“दैन जबसम्म शिष्यले पूर्ण समर्पण गर्दैन ।
चिकित्सककहां पुगेर उसलाई जिम्मा लगाएमा बल्ल औषधिले काम गर्छ । गाडीमा चढे पछि चालकलाई जिम्मा लगाएपछि उसले धैर्यपूर्वक लक्ष्यमा पुर्याउंछ । गुरुलाई पूर्ण समर्पण गरेपछि बल्ल बोध हुन्छ । पूर्ण समर्पण बिना बोध हुंदैन । यो उपनिषदकारहरुको लामो शोध र अनुभवजन्य निष्कर्ष हो ।
त्यसैले ज्ञानार्थीहरुलाई सिकाइने पहिलो मन्त्र हो–
गुरुब्र्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर ।
गुरु साक्षात् परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवै नमः ।।
स्वामी विवेकानन्दले गीताका ज्ञानयोगको व्याख्या गर्दा भनेका छन्– गीतालाई संस्कृत धर्मग्रन्थहरुको चुडामणि भनिन्छ । यो वेदको भाष्य रुप हो । गीता अत्यन्त सम्मानित काव्य ग्रन्थ हो । यस ग्रन्थले हामीलाई प्रष्टसंग भन्छ– आध्यात्मिक संग्राममा विजयी हुनु छ। विजयी हुनै पर्छ, । भागेर काम बन्दैन । समस्त आध्यात्मिकता अंगाल्नु पर्छ । गीताको प्रत्येक अध्याय आध्यात्मिक उचाईका लागि भर्याङ् हो । र शरणागति यसको अन्तिम खुडकिलो । त्यस पछि लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । ग्रन्थहरुमा श्रेष्ठतम हो गीता ग्रन्थ र यसको गुह्यतम र अन्तिम शिक्षा हो– शरणागति योग । गीताको राजयोग बारेमा सारा संसारलाई जानकारी दिने स्वामी विवेकानन्दको यसै हप्ता विश्वभर जन्मोत्सव मनाईंदै छ । भारतमा उनको जन्म दिन लाई युवा दिवसको रुपमा मनाइन्छ । किनभने यस युवाले आध्यातिमक क्रान्ति गरेका थिए । ३३ वर्षको उमेरमा उनले संसार छोडेका हुन् । तर उनले यति धेरै काम गरेका छन् जुन विगत २०० वर्षमा अलिकति मात्र अध्ययन हुन सकेको छ र अझै २०० वर्षका लागि जति पनि काम गर्न सकिन्छ ।
कोमल गीतामा उपर्युक्त श्लोकको अनुवाद निम्नलिखित प्रकारले गरिएको छ–
फेरि रहस्य सबको मुख्य बात बताउ“छु ।
मेरो ज्यादै पियारा छौ, त्यसैले हित भन्दछु ।।६४।।
ममा मन ममा भक्ति मेरै अर्चन बन्दन ।
गर मिल्छौ ममा प्यारा छौ, सा“चै भन्छु अर्जुन ।।६५।।
सारा धर्महरु छोडी मेरै शरणमा पर ।
छुटाउ“ला सबै पाप, शोक छोड धनुर्धर ।।६६।।
बाइबिलको प्रचार गर्नेहरुले ईसाको एउटा भनाईलाई आपप्नो सूत्र मानेर बिmस्तनहरुले विश्वमा आफ्ना धर्मको प्रचार गर्न सकेका हुन् । त्यो के हो भने उनी मनुष्य मात्रलाई पापमुक्त गर्न आएका हुन् । शोकमुक्त गर्न आएका हुन् । गीताको अन्तिम उपदेश नै त्यही हो– सारा धर्महरु छोडी मेरै शरणमा पर । छुटाउ“ला सबै पाप, शोक छोड धनुर्धर ।।६६।।
सारा धर्म छोड्नु भनेको के हो ? भगवान् श्रीकृष्णको यो भनाइ हिन्दु वा यहुदी वा जोरोष्टर यस्ता कुरासंग सम्बन्धित छैन । श्रीकृष्णले भन्न खोज्नु भएको धर्म भनेको उ भित्रको ठूलोपन वा सानोपन हो । मलाई धेरै मान्छन् वा कसैले टेर्दैन । म ठूलो पदमा छु वा सानो पदमा छु । मैले धेरै जानेको छु वा मैले केही जान्दिनं । उसका व्यक्तिगत गुण, भावना, अहंकार इत्यादि । यी सब त्याग गरेर मैले केही सिक्नु छ यही एक मात्र कुरा मनमा राख्नु भनिएको हो ।
हिन्दु धर्मका समुद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य, जसले यस संसारलाई ३२ वर्षमा छोडेका हुन्, यी युवा संन्यासीले ६६ औं श्लोकलाई उपदेशको रुपमा यसलाई अन्तिम श्लोक मानेका छन् । यस पछि उनले गीताको केन्द्रिय विषय वस्तु के हो ? यसको खोजीनीति गरेका छन् । कुनै ग्रन्थको अध्ययन पछि उपसंहारमा पाठकलाई के हात लाग्नु पर्छ ? स्वयं आचार्यले भाष्यबाट के निष्कर्ष प्राप्त गरे ? यस विषयमा विचार गरेका छन् । गीता उपदेशको निष्कर्ष ज्ञान हो कि कर्म ? कि दुवै ? अस्मिन् हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयस साधनं निश्चितं किं ज्ञानं किं कर्म वा आहोस्विद् उभयम् इति । यस विषयमा उनले केही शंका र त्यसको समाधानका तर्क प्रस्तुत गर्दै आत्म–ज्ञान नै गीता उपदेशको उद्देश्य हो भन्ने निष्कर्ष प्राप्त गरेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्– किन शंका भयो ?
अनि आफैं उत्तर दिएका छन्– किनभने जसलाई जानेर तिमी अमर हुने छौ । त्यस पछि तत्त्वले जानेर ममा प्रविष्ट हुनेछौ । तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ । तिमीले कर्म नै गर । यी भनाईले दुवै चाहिन्छ जस्तो पनि छ । त्यसैले कुन महत्त्वपूर्ण हो, त्यसको मीमांसा गर्नु जरुरी छ ।
प्राचीन तर्कशास्त्रमा गरिने यस प्रकारका प्रश्न उत्तरलाई पूर्व पक्ष र उत्तर पक्ष भनिन्छ । यो प्रश्न पनि आफैं गरिएको हो र तयसको समाधान पनि आफैंले पत्ता लगाइएको हो ।
शंकरले भनेका छन्– केवल आत्म–ज्ञान परम कल्याणको साधन हो । जतिसम्म भेद छ भन्ने लाग्छ त्यो मोक्ष प्राप्तिको समयान्तराल हो । यो भनेद समयको हो, ज्ञान र अज्ञानको होइन ।
आत्मामा क्रिया, कारक, र फल विषयक भेदबुद्धि अविद्याले गर्दा हुन्छ । कर्म मेरा हुन् । म त्यसको कर्ता । अमुक फलका लागि यो गरेको छु । यो अविद्या अनादिकालदेखि चलिआएको छ । म केवल अकर्ता, क्रियारहित र फलरहित आत्मा हुं । मबाट भिन्न अरु केही छैन । यस्तो आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न हुनासाथ कर्म प्रवृत्ति हेतु भेदबुद्धिको नाश हुन्छ । आचार्य शंकरको षटपदीमा उनका यस दर्शनको ज्ञान हुन्छ–
सत्यापि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ।।
(हे नाथ, तपार्इंं र मेरा बीचको भेद अपगत भयो अर्थात् तपार्इंं र म एउटै हो भन्ने ज्ञान भइसक्यो । तर पनि म तपार्इंको हु“, तपार्इं मेरो कदापि होइन । हुनत, समुद्र र तरंग एउटै हुन्छ तर पनि समुद्रको तरंग भनिन्छ, तरंगको समुद्र भनिंदैन अर्थात् तरंगले आफूलाई कहिल्यै पनि म समुद्र हु“ भन्न सक्दैन ।)
प्रश्न– त्यसो भए, मोक्ष अकार्य छ भने त ज्ञान पनि व्यर्थ छ ?
उत्तर– होइन, जसरी बत्तीको उज्यालोले रस्सीमा सर्पको भ्रान्ति हटाउ“छ, र अन्धकार नष्ट गर्छ । प्रकाशको फल भ्रान्ति विकल्प हटाएर वास्तविकता दर्शाउनु हो । आत्मज्ञान परम ज्ञान भएकाले त्यसको प्राप्तिका अगाडि अन्य ज्ञान तुच्छ हुन्छन् ।
प्रश्न– अनि, नित्यकर्म नगर्ने, केही पनि नगर्ने मुक्त हुन्छ ? पूर्वजन्मका फलको उपभोग कर्मको नाश हुनसक्दैन ? पूर्वजन्मका कर्म नित्यकर्म रुप हुन्छन भने त्यो भोगे पनिमोक्ष हुन्छ, त्यसो भए ?
उत्तर– होइन । नित्यकर्म र काम्य कर्म पनि पूर्व जन्मको कृत्यको फल हो । आरुरुक्षका लागि गीतामा कर्तव्य कर्म बताइएको छ र आरुढका लागि उपशम । तीन प्रकारका भक्त हरु पनि उदार छन् तर ज्ञानी मेरै रुप हो भनिएको छ । उनीहरुलाई मैले बुद्धियोग दिन्छु इत्यादि भनेर ज्ञानलाई नै प्रधान बताइएको छ ।
प्रश्न– त्यसो भए सबै कर्म अविद्यामूलक हुन्छन् ?
उत्तर– ब्रह्महत्यालाई निषिद्ध कर्म भनेको छ । नित्यकर्म शास्त्र प्रतिपादित छन् । तथापि अविद्यायुक्त छन् । किनभने ब्रह्महत्यामा जस्तै नित्य नैमित्तिक कर्ममा अविद्या र कामना हुनसक्छ । यस्ता प्रश्न उत्तरलाई वैदिककालीन वाद विवाद र निष्कर्षलाई पूर्व पक्ष र उत्तर पक्ष भनिन्छ । यी दुवै पक्ष त्यसबेला तर्क शास्त्र र शोध विधिका अनिवार्य अंग मानिन्थे ।
अबका तीनवटा श्लोकमा भगवान् कृष्णले आफ्ना उपदेशहरु उपसंहार गर्दै हुनुहुन्छ ।
गुह्यको अर्थ अरु कसैलाई बताउन नहुने भनेको होइन । गुह्य भनेको कुनै रहस्य भनेको पनि होइन । गुह्यको अर्थ हो आफ्नो सबभन्दा प्रिय व्यक्तिलाई बताउने कुरा । आफ्ना सबैभन्दा प्रियलाई, आफ्नो सबभन्दा निकटतमलाई जुन कुरा बताइन्छ त्यो । लुकाएर राख्ने भनेको होइन । श्रीकृष्णको भाव गोप्य हो । सबभन्दा सजिलो उपाय बताइएको हो । आचार्य शंकरले सारै मार्मिक तरिकाले यसको भाष्य गरेका छन् । यसलाई गीताको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्लोक मानेका छन् । उनले सर्वधर्मान्परित्यज्यको अर्थ सबै धर्माधर्मलाई त्याग गरेर केवल मेरो शरणमा आउ भन्ने अर्थ गरेका छन् । अधर्मको मात्र होइन धर्मको पनि त्याग गर्ने भनेका छन् । यस्ता कुराहरु नैतिकतावादीका लागि पाच्य हुंदैन । तर सत्य धर्म र अधर्म दुवैभन्दा पर छ भनेका छन् शंकरले ।
गीताको प्रतिपाद्य विषय ज्ञान हो कि कर्म ? यसको विस्तृत विवेचन श्लोक ६६ का आधारमा गरेका छन् । र गीताको अन्तिम लक्ष्य आत्म ज्ञान हो भन्ने निष्कर्ष प्राप्त गरेका छन् । विश्लेषणका लागि तर्कशास्त्रका विभिन्न विधि प्रयोग गरिएको छ । प्रश्नोत्तर तथा पूर्वपक्ष र उत्तरपक्षका विश्लेषण यथास्थान प्रयुक्त गरिएको देख्न सकिन्छ । उनले १० प्रकारका शंकाहरु प्रस्तुत गर्दै तिनीहरुको समाधान दिएका छन् । जसमा उनले गीताको उद्देश्य आत्मज्ञान हो भन्ने कुरा सिद्ध गरेका छन् । यो तर्क किन पनि सही छ भने कर्म गर्नका लागि पनि ज्ञान त चाहियो । मेशीनले जस्तो गरी कर्म गर्नुको पनि कुनै सार हुन्छ र ?
न चाशुश्रूषे वाच्यं न च मां योsभ्यसूयति ।।६७।।
यो (गीता उपदेश) कुनै पनि अवस्थामा तिमीले तपरहितलाई भन्नु हुंदैन । अभक्तलाई भन्नु हुंदैन । सुन्न अनिच्छुकलाई भन्नु हुंदैन । र जसले म प्रति दोषदृष्टि राख्छ, त्यस्तालाई भन्नु हुंदैन ।
गीता ग्रन्थ सबैले अध्ययन गर्न पाउ“छन् । यसमा उमेर, लिंग, वर्ण, जाति वा धर्म कुनै कुराको बन्देज छैन । आश्चर्यजनक कुरा के छ भने विश्वको हरेक धर्म सम्प्रदायका मानिसहरुले यसमा आफुलाई चाहिने सामग्री प्राप्त गर्न सक्छन् । गीताले कुनै मतलाई, कुनै दृष्टिकोणलाई घोचेको, होच्याएको कहीं छैन । बरु त्यसबेला सम्मका दर्शनहरुलाई समन्वय गरिएको छ । तर गीतालाई त्यसको मूल रुपमा अध्ययन गर्ने क्षमता विकास गर्नु पर्छ । अनुवादहरुमा मूल कुराहरु हराउन सक्छ । गीता कसलाई भन्न हुन्छ? जसले ध्यानपूर्वक सुन्छ । असल शिष्यलाई । असल शिष्य भनेको त्यो हो जसले गुरुले सिकाएको गर्छ । गुरुले सिकाएको गाउंदै हिंड्ने वा केवल गुरुको प्रशंसा मात्र गर्नेलाई असल शिष्य भनिंदैन ।
गीता अध्ययनका लागि पनि केही पूर्व मान्यताहरु राखिएको छ । यसलाई अध्ययन गर्ने तपस्वी हुनु पर्छ । तपको अर्थ हो गीतामा जे भनिएको छ सो कुरा ईमानदारीसाथ पालन गर्नु । सुन्ने मानिस भक्तिमय भावमा हुनु पर्छ । यसबाट केही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास पाठकको मनमा हुनु पर्छ । दोषदृष्टि भएकोा हुनुहुंदैन । सिपालु छ, केही ज्ञान पनि छ तर हरेक कुराको उल्टो अर्थ लगाउने क्षमता भएकाहरुलाई दोष दृष्टि भएका भनिन्छ । यस्ता कुतर्क गर्नेलाई गीता बुझाउन सकिंदैन । कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भनेको काम गर्नु फलको आशा नगर्नु हो, त्यसैले दिनभरि काम गर्नेलाई सांझ ज्याला दिनु पर्दैन भन्ने अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ । अथवा कुनै फलको इच्छाले होइन, कर्तव्य नै अधिकार हो त्यसैले कर्तव्य पूरा गर्नु पर्छ भन्न पनि सकिन्छ । अधिकार होइन कर्तव्य प्रमुख हो ।
गीता अध्यात्मशास्त्र हो । तथापि यसका उपदेशबाट लौकिक जीवनको पनि एक सूत्र प्राप्त हुन्छ । त्यो के हो भने यदि कुनैले रुचाउंदैन, त्यसकहां गएर केही भन्नु बिलकुल बेकार छ । नीति भन्छ– विषधर सर्पलाई दूध खान दिंदा खाली उसको विष मात्र वृद्धि हुन्छ । दुष्टलाई उपदेश दिनु प्रत्युत्पादक हुन्छ । पञ्चतन्त्रमा एउटा कथा छ । पानी परेपछि गौंथली गुंडमा सुरक्षित बसेको थियो । रुखमा बांदर रुझेर जाडोले थर्थर कामिरहेको थियो । बांदरको दुर्दशा देखेर गौंथलीलाई टीठ लाग्यो । गौंथलीले सम्झाउन थालेछ– तिम्रा त हात छन् । मभन्दा बाठो छौ । मैले बनाए जस्तो घर बनाए त रुझ्न पर्दैनथ्यो ? सजिाले गरी घर बनाउन सकिन्छ । झन् तिम्रा त हात पनि छन् ।
त्यो सुने पछि रिसाएर बांदरले भन्यो– मामुली चरी, अझ मलाई अर्ती सिकाउंछेस् । यति भनेर गौंथलीको गुंड भत्काइ दियो ।
दुष्टलाई उपदेशको त के कुरा याचना पनि निरर्थक हुन्छ ।
ईसपको कथा छ– एउटा भेडाको पाठो खोलामा पानी खा“दै थियो । एउटा ब्वा“सो छेउमा उभिएर पानी खान थालेछ । अनि पाठोलाई राता राता आ“खाले हेर्दै भनेछ– हेर्दैनस् मैले पानी खा“दै छु । पानी जुठो गराउ“छस् ।
पाठोको गल्ती त थिएन तर माफी माग्दै अलि तल गएर पानी खान थालेछ ।
ब्वा“सोले भन्यो– फेरि पानी फोहोर गरिस् । तेरा र मेरा बीचको यो पानी धमिलो किन गराइस् ?
पाठोले भन्यो– होइन हजुर । यहा“ त तपाईंले कुचेको, जुठो बनाएको, र धमिलो पानी पो मसंग बगेर आएको छ र मैले त्यही पानी खांदै छु ।
ब्वा“सोले भन्यो– अझ बोल्छस् । त्यो फोहर पानी तैंले माथितिर पठाइरहेको छस् ।
यति भनेर पाठोलाई मारेर खायो ।
दोषदृष्टि भनेको ब्वा“सोको दृष्टि हो । त्यसैले यस्ता मानिसलाई गीता उपदेश गर्नु निरर्थक प्रयास हो ।
त्यसो भए कस्ता मानिसलाई गीता शास्त्र भन्न हुन्छ ?
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्संशयः।। ६८।।
भविता न च मे तस्मादन्य ः प्रियतरो भुवि ।।६९।।
जसले यस परम गोपनीय विषय (कुराकानी) मेरा भक्तहरुलाई निष्कामपूर्वक भन्ने छ । उसले मेरो पराभक्ति प्राप्त गर्दै मलाई नै प्राप्त गर्नेछ । यसमा संशय छैन । र त्यसभन्दा मेरो प्रिय गर्ने (वर्तमानमा) अर्को कोही पनि मानिस छैन र भविष्यमा पनि पृथिवी भरि उभन्दा प्रिय अर्को हुने छैन ।।६८–६९।।
गुह्यको अर्थ हो केवल प्रिय व्यक्तिसंग, अन्तरंगसंग भन्ने कुरा । रहस्यपूर्ण वा अरु कसैलाई भन्न नहुने कुरा होइन । अर्जुन कृष्णका अन्तरंग मित्र र शिष्य दुवै थिए ।
श्रीकृष्ण जस्तो गुरुको गुरुता अर्जुन जस्ता शिष्यको शिष्यतामा भर पर्छ । श्रीकृष्णले दिएका उपदेश त कति छन् कति ? तर उनको प्रसिद्धि गीताबाट छ । किनभने अर्जुन जस्ता शिष्यले त्यो सुने ।
अर्जुनको वीरता पनि कति छ कति तर कुरुक्षेत्र युद्धको वीरताका अगाडि सबै गौण छन् किनभने उनले त्यो कृत्य गरेको शिष्यताको उच्चता प्राप्त गरे पछि हो । रामकृष्णको शिष्य स्वामी विवेकानन्द भए । स्वामी विवेकानन्दले कहिल्यै पनि आफुलाई विशेष ठानेनन् । मभित्र मेरा गुरु बोलिरहनु भएको छ भन्थे स्वामी विवेकानन्दको प्रसिद्धि उनकी शिष्या निवेदिता (मार्गरेट) मा आधारित छ । खप्तडबाबाको प्रसिद्धि राजा वीरेन्द्रको शिष्यतामा भएको हो । मार्शलको प्रसिद्धि पीगु, हिक्स र केन्सको शिष्यत्वबाट भएको हो । आइन्स्टीनको ओपहाइमरबाट
अध्येष्यते च य इमं संवादमावयो ः ।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।।७०।।
सोSपि मुक्तः शुभांल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ।।७१।।
जसले हामी दुईको संवाद अध्ययन गर्ने छ उसले पनि ज्ञानयज्ञ गरेको हुनेछ र यस कृत्यद्वारा म इष्ट (पूजित) हुनेछु । यो मेरो मति (संकल्प) हो । जुन मनुष्यले श्रद्धायुक्त र अनसूय भइ श्रवण गर्छ, त्यो पनि मुक्त भएर, पुण्यकर्म युक्त भइ शुभ लोकहरुमा जानेछ ।।७०–७१।।
अध्यात्म ग्रन्थहरुको एउटा अनौठो परमपरा छ, त्यो के भने यसलाई मनन गरे हुन्छ । त्यसमा लेखेको कुरा जीवनमा उतार्नु सबभन्दा उत्तम हो । त्यसलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन गरे पनि हुन्छ । नबुझी नबुझी पाठ गरे पनि हुन्छ । तर ती व्यक्तिहरु जसले पढ्न जान्दैनन् उनीहरुले रातो कपडामा बेरेर श्रद्धापूर्वक स्वच्छ स्थानमा राख्छन् । जुन अवस्थामा पनि श्रद्धा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । यस श्रद्धाले मानिसको भित्र रुपान्तरण हुन जान्छ ।
ज्ञान मार्गमा प्रयास गर्ने व्यक्ति ज्यादै कम हुन्छन्, त्यसमध्ये सफल हुने झनै कम हुन्छन् । अन्टार्कटिकामा दुइ पटक गएर छ छ महिना बसोबास गरेर भारतको वैज्ञानिक अभियान दललाई सहयोग गर्ने नेपाली भुवनसिंह आफ्नो अनुभव सुनाउ“दै भन्ने गर्छन्– वि.सं.२०४३ मा अन्टार्कटिक महादेशको वैज्ञानिक अभियानमा जान लगभग २०० जना छनौट भए । यस पछि विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षण पार गर्दै जा“दा सबै परीक्षणहरुमा उत्तीर्ण हुने २० जनामा म पनि परें । अन्टार्कटिकको माइनस ९० डिग्री सेल्सियसको चिसो । मानिस को त के कुरा पेंगुइन बाहेक अन्य प्राणी नपाइने ठाउं । आफ्ना प्रिय नातेदारसंग महिर्नौंंको सम्बन्धविहीनता । छ महिना उरण्ठ्याउलो दिन र छ महिनाको लामो पट्यार लाग्दो रात । एक नासको एकान्त । विश्व कै सुनसान स्थान । अनेक प्रकारका कल्पनाहरुले गर्दा मानिसहरु यस्ता काममा हात हाल्न डराउंछन् । यस भौतिक दुनिया“को यात्रामा शयौंमध्ये केही थोरैले प्रयास गर्छन् । प्रयास गर्नेमध्ये पनि सबैले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । केवल लगनशीलले मात्र प्राप्त सफलता गर्नसक्छन् ।
भगवान् श्रीकृष्णले भन्नु हुन्छ– यसरी मप्रति श्रद्धा राख्ने, लगनशील, सच्चा भक्त अवश्य सफल हुन्छ । किनभने सच्चा श्रद्धाले उसमा मप्रति स्वाभाविक प्रेम र विश्वास उत्पन्न गरीदिन्छ । यो विश्वास उत्पन्न नभइ शिष्यत्व उत्पन्न हुंदैन । शिष्यत्व उत्पन्न नभइ गुरुले भनेको कुनै पनि कुरा बुझिंदैन । शिष्यत्व नआइकन उपदेश दिनु केवल अरण्यरोदन हुन्छ ।
कच्चिदेतच्छ«ुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टते धनञ्जय ।।७२।।
हे पार्थ, के मैले भनेका यी कुरा ध्यानपूर्वक सुन्यौ ? हे धनञ्जय, के तिम्रो अज्ञानजनित मोह नष्ट भयो ?
एक दयालु शिक्षकले आफ्ना शिष्यको शंका पूर्णतः समाधान भएको हेर्न चाहन्छ । त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णले अन्तमा सोध्नु भएको छ– अर्जुन, मैले भनेका कुराहरु स्पष्ट भए कि भएनन् ? कि अब कुनै जिज्ञासा बांकी छ ?
यस अन्तिम भनाईले गीतालाई शिक्षा शास्त्रको उत्कृष्ट ग्रन्थ र भगवान् कृष्णलाई विश्वका महानतम शिक्षक प्रमाणित गर्दछ ।
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोद्रस्मि गतसन्देहः करिष्येवचनं तव ।।७३।। हे अच्युत, तपाईंका कृपा प्रसादले मोह नष्ट भयो । मैले स्मृति प्राप्त गरें । सन्देह गयो । म स्थिर भएं । तपाईंले जे भन्नु हुन्छ, त्यो गर्छु ।
व्याख्या कम्पयुटरको ज्ञान राख्नेलाई के थाहा छ भने त्यसको सूचना संकलन, विश्लेषण, समुचित गति, र काम गर्ने प्रक्रिया त्यसको मेमोरी– स्मृतिमा भर पर्छ । यदि मेमोरी क्षमता नै गडबड छ भने उसले कमाण्ड लिन मानदैनन् । लिइ हाल्यो भने त्यसलाई प्रोसेस गर्दैन । परिणाम प्रदान गर्दैन । दिए पनि गलत । मानिसको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मस्तिष्क हो । सन्तुलित मस्तिष्क । उचित स्मृति राख्न सक्ने । त्यस पछि मानिसले ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक बुझ्न सक्छ । जब सम्म मानिसले ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक बुझ्दैन उसले हमेशा गलत काम गर्नेछ । वा केही गर्न सक्ने छैन ।
त्यही कुरा अर्जुनले स्पष्ट गरेका छन् । अच्युतको अर्थ हो, बिल्कुल ठीक– एब्सोलयुटली करेक्ट । अर्जुनलाई बल्ल के स्पष्ट भयो भने कृष्ण पो ठीक रहेछन् । अर्जुनलाई सुरुमा लागेको थियो– व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा, शास्त्र अनुसार विचार गर्दा, र ज्येतिष अनुसार शकुन हेर्दा केही पनि शुभ छैन । यसले के सिद्ध भइरहेको छ भने युद्ध गर्नु गलत छ । अनि उसको निष्कर्ष थियो– उनीहरुले नै राज्य गरुन् । मैले बरु मागेर खान्छु ।
तर अहिले अर्जुनलाई स्पष्ट भयो त्यो सबै निष्कर्ष दोषपूर्ण रहेछ । किनभने उसको मेमोरीले काम गर्यो ।
श्रीकृष्णले त सुरुमा नै भन्नु भएको थियो– अर्जुन, युद्ध गर्नु तिम्रो स्वभाव (धर्म) हो । भाग्नु कायरता हो । तिमीले शास्त्र अनुसार काम गरेका छैनौ । बहाना बनाउनका लागि शास्त्र पल्टाएर प्रमाणका लागि आफुलाई चाहिने चाहिने पाना खोजिरहेका छौ । अर्जुनका ती प्रमाण जिम्मेवारी लिनका लागि थिएनन् । भाग्नका लागि थिए– इस्केपिज्म । म आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भएं । म अलमलमा परें भन्ने वाक्यांशबाट सुरु भएको गीता मैले अब आफ्नो कर्तव्य बुझें, अब भाग्दिन, जिम्मेवारी लिएं भन्ने वाक्यांशमा समाप्त भयो । यसरी निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरे पछि कृष्णले बोल्ने प्रयोजन रहेन । अब गीतामा सञ्जयले बोलेका केवल तीन श्लोक छन् ।
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ।।७४।।
व्यासप्रसादाच्छु«तवानेतद्गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ।।७५।।
यस प्रकार वासुदेव र महात्मा अर्जुनको यो अद्भुत रोमांचकारी संवादमा व्यासको कृपाले साक्षात् योगेश्वर कृष्णले भनेको यस परम गुह्य योगका सबै कुरा, मैले आफैं सुनें ।
कृष्णलाई अध्याय ११ मा एक पटक सञ्जयले र एक पटक अर्जुनले महात्मा भनेका छन् । यस श्लोकमा अर्जुनलाई महात्मन् भनिएको छ । कृष्णका १००० नाम महाभारतमा पाइन्छन् । यसमध्ये भगवान् श्रीकृष्णलाई गीतामा अच्युत, अनन्त, वासुदेव, योगेश्वर इत्यादि ३२ नामले र अर्जुनलाई भरत, पृथा, कौन्तेय आदि १८ विभिन्न नामले सम्बोधन गरिएको छ । अर्जुनलाई यहां महात्मा भनिएको छ । यो के कुराको संकेत हो भने ज्ञानको प्राप्ति नहु“दै अर्जुन महात्मा सम्बोधनको अधिकारी थिएनन् । तर जब अर्जुनले जब ज्ञान प्राप्त गरे अनि उनी महात्मा बने । अर्जुन मात्र होइन ज्ञान प्राप्त गरे पछि प्रत्येक व्यक्ति महात्मा बन्छ । जब आफ्नो वास्तविक रुप आत्माको जानकारी हुन्छ व्यक्ति महात्मा बन्छ ।
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ।।७६।।
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रुपमत्यद्भुतं हरेः ।
विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ।।७७।।
हे राजन्, केशव र अर्जुनका यी कल्याणकारक र अद्भुत संवाद सम्झी सम्झी म बारम्बार हर्षित हुन्छु । श्रीहरिका यी अत्यन्त अद्भुत (विश्व) रुपलाई सम्झी सम्झी मलाई अति विस्मय हुन्छ । अनि हे राजन्, म बारम्बार हर्षित हुन्छु ।
पहिलो अध्यायको दोस्रो श्लोकमा सञ्जयले दुर्योेधनलाई एक पटक राजा भनी सम्बोधन गरेका थिए । यस श्लोकमा र अर्को श्लोकमा सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई दुइ पटक राजन् भनेका छन् । धृतराष्ट्रले प्रश्न सोधेर गीता सुरु भएको थियो । जसको उत्तर दिन सञ्जयले प्रारम्भ गरेका थिए । जसरी र जहांबाट ग्रन्थ प्रारम्भ भयो, त्यसै गरी समाप्त गर्नु पर्दछ । समस्या प्रारम्भ भएपछि विश्लेषण हुन्छ र समाधान प्राप्त हुनासाथ त्यो समाप्त हुन्छ । सारांश के हो भने जहांबाट समस्या प्रारम्भ भएको थियो ग्रन्थ त्यहीं आएर समाप्त भएको छ । धृतराष्ट्र र सञ्जयको कुराकानीबाट प्रारम्भ भएको गीता त्यसै स्थानबाट समाप्त हु“दैछ । अब धृतराष्ट्र केवल श्रोता छन् । सञ्जयले कुरा टुङ्ग्याउ“दै छन् ।
महाभारत कथा अनुसार, कौरव र पाण्डवका बीच समझौता गराउन आएका कृष्णलाई दुर्योधनले अपमानपूर्वक पठाइदिए पछि व्यासले धृतराष्ट्रलाई आएर भेटे । भने, राजन्, कुरुवंशमा ठूलो विनाश हुनेवाला छ । यदि तिमीले चाहन्छौ भने मैले तिमीलाई दिव्यदृष्टि अर्थात् दूरदृष्टि दिन्छु । यसको प्रभावले तिमीले यहां बसेर कुरुक्षेत्रमा भएका सबै घटनाहरु प्रत्यक्ष देख्ने छौ । यति मात्र होइन, प्रत्येक योद्धाका मनमा भएका कुरा पनि देख्ने छौं, बुझ्न सक्ने छौ ।
धृतराष्ट्रले भने, म जन्मान्धले आजसम्म गतिलो केही देख्न पाइन । अब जीवनको अन्तिम समयमा आफ्नै कुलको संहार हेर्नका लागि मलाई दृष्टि किन चाहियो । तर युद्धको विवरण थाहा पाइराख्न यो दिव्यदृष्टि मेरो नया“ सचिवलाई दिनुहोस् । नया“ सचिव थिए सञ्जय ।
पाण्डवहरुलाई उनीहरुो जायज अधिकार दिनु पर्ने बारे विदुरका कुरा दरबारमा नसुनिए पछि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । र त्यस रिक्त पदमा सञ्जयलाई सचिव बनाइएको थियो । यसरी सञ्जय आकस्मिक रुपमा गीता शास्त्रको विवरण दिने व्यक्ति बन्न पुगेका थिए । यही कुरा उनले श्लोकमा भनेका छन् । व्यासको प्रसादले दिव्य दृष्टि प्राप्त गरें । कुरु क्षेत्र देखें । युद्धका घटना, गीताको उपदेश, र विश्वरुपको दृश्य देखेर म सम्झ“दै र रोमाञ्चित हुंदै गइरहेको छु । जसरी म्यारी गो राउण्डमा पहिलो पटक चढेको बालक त्यो घटना सम्झंदै आनन्दित पनि हुन्छ र जिरिङ् जिरिङ् पनि गर्छ, त्यही हालत सञ्जयको छ । हरिको अर्थ हो हरण गर्ने । जसले शुभ र अशुभ सबै हरण गरेर एक मात्र सत्यलाई बांकी राख्छ । त्यो हरि हो । त्यसैले यो संझेर विस्मय भइरहन्छ ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धु्रवाः नीतिर्मतिर्ममः।।७८।। जम्मा श्लोक ७००।।
जहां योगेश्वर कृष्ण हुनुहुन्छ । जहां धनुर्धर अर्जुन छन् त्यहां विजय, भूति, र नीति हुन्छ यस्तो मेरो अटल विश्वास छ ।
अब उनी धनुर्धर हुन् अर्थात् अब अर्जुनले हतियार समाते । यसको अर्थ के हो भने अब उनी जिम्मेवारी लिन तैयार छन् । भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुनको नाम यहां एउटै श्लोकमा एक साथ आयो । कर्तव्य र कर्तव्य परायण अब एकाकार भए । बाटो लक्ष्यमा पुग्यो । अर्जुन र कृष्ण एकै ठाउंमा छन् । दुवैको मानसिकता एक समान नभएसम्म गुरुले शिष्यलाई जुन विधिबाट शिक्षण दिए पनि सफल शिक्षण हुन सक्दैन । त्यसैले अर्जुनका १० वटा पर्यायवाचीमा एउटा नाम कृष्ण पनि हो । एक जना सन्तले यसलाई आत्मा र परमात्माको मिलनको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । स्थिरता साथ ध्यान गर्नेले विजय प्राप्त गर्छ । मनको एकाग्रता नै सम्पूर्ण सफलताको आधार हो । यही ईश्वरीय विभूति हो यही संसारको नीति हो । ध्यान धनुष हो, गाण्डीव भनेको इन्द्रियको दृढता हो । अर्जुन आज पनि प्रत्येकका मनमा अनुराग भइ बसेका छन् । कृष्ण आज पनि सबैका हृदयमा विवेकरुपमा बास गर्नुहुन्छ । यदि अनुराग अन्तःकरणमुखी छ भने आत्मा र परमात्माको अन्तर रह“दैन । महात्माहरुले विजय प्राप्त गर्ने भनेको यही हो ।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नामाष्टादशोध्यायः ।
अध्याय १८ को सार–संक्षेपसम्पादन
विगतका सोह्रवटा अध्यायका उपदेश मनन गरिसके पछि पनि अर्जुनका मनमा शंका भइनै रह्यो । किनभने गीताको सन्न्यास र प्रचलित सन्न्यासमा उनले अन्तर देख्छन् । उनलाई के लाग्छ भने त्याग र सन्न्यास अर्कै अर्कै हो, एउटै होइन । यस शंकाको निवारण गर्दै भगवान्ले गीता ज्ञानको सार दिंदै हुनुहुन्छ । धेरै जसो कर्महरुमा कामना भरिएको हुन्छ । अनेक इच्छा पूरा गर्न मानिसले अनेकानेक उद्यम गर्नु पर्छ । यस्तो कर्म काम्य कर्म हो । अन्य आवश्यक र स्वाभाविक कर्म हुन्छन्् जस्तै, सा“स फेर्नु, देह रक्षाका लागि खानु, लुगा लगाउनु, ओढ्नु, ओच्छ्याउनु, सुत्नु इत्यादि । तेस्रो कर्म पारमार्थिक कर्म हो । यी मध्ये काम्य कर्मको त्याग गीताको गीताको सन्न्यास हो । र कर्ममात्रका फलको त्यागलाई गीताले त्याग भनेको हो ।
के भन्न सकिन्छ भने कर्ममात्रमा केही न केही दोष जरुर हुन्छन्, तर यज्ञार्थ अर्थात् परोपकारार्थ कर्मको त्याग विहित छैन । यज्ञभन्दा दान र तप पनि त्यसैमा पर्छन् । तर परमार्थमा आसक्ति, मोह हुनुहुंदैन । अन्यथा त्यसमा खराबी आउन सक्छ ।
मोहवश नियत कर्मको त्याग तामस त्याग हो । शारीरिक कष्टको डरले गरिएको त्याग राजस हो तर सेवा कार्यको भावनाले बिना फलेच्छाको त्याग सच्चा सात्विक त्याग हो । अतः यहां कर्ममात्रको त्याग होइन कर्तव्य–कर्मका फलको त्याग हो र अन्य अर्थात् काम्य कर्मको भने त्याग हो । यस्ता त्यागीलाई कुनै शंका हुंदैन । उसको भावना चोखो हुन्छ र उसले सुविधा असुविधाको ख्याल गर्दैन ।
जसले कर्म फलको त्याग गर्दैनन् उनलाई असल खराब फल भोग्नु पर्छ । तर फल त्यागी भने बन्धनमुक्त हुन्छ ।
कर्मको विषयमा मोह के हो? म कर्ता हु“ भन्ने अभिमान मिथ्या हो । कर्ममात्रका सिद्धिमा पा“च कारण हुन्छन्, स्थान, कर्ता, साधन, क्रिया, र यी बाहेकको अन्तिम दैव । यो बुझेर मानिसले आफ्नो अभिमानको त्याग गर्नु पर्छ । अहंता छोडेर जे गरे पनि कर्तालाई के भन्न सकिन्छ भने उसले गर्दागर्दै पनि केही गरेन । किनभने उसलाई कर्मले बा“ध्न सक्दैनन् । यस्ता निरभिमान, शून्यवत् भएका मानिसको विषयमा के भन्न सकिन्छ भने उसले मार्दैछ भने पनि मादैन । यसको अर्थ के होइन भने कुनै मानिसले शून्यवत् रहंदा पनि हिंसा गर्छ र अलिप्त रहन्छ । निरभिमानीलाई हिंसाको प्रयोजन नै के बांकी रह्यो ?
कर्मको प्रेरणामा तीन कुरा हुन्छन् ज्ञान, ज्ञेय, र परिज्ञान, र उसका तीन अंग हुन्छन्– इन्द्रिय, क्रिया र कर्ता । जसले गर्छ उ ज्ञेय हो । जुन त्यसको विधि हो, त्यो ज्ञान हो र जान्नेवाला जो छ त्यो परिज्ञाता हो । यसरी प्रेरणा भएपछि कर्म हुन्छ । उसमा इन्द्रिय कारण हुन्छन् । जुन कुरा गर्ने हो त्यो क्रिया, र त्यसलाई जसले गर्छ । त्यो कर्ता हो । यसरी विचारबाट आचार हुन्छ । जसबाट हामीले प्राणी मात्रमा एउटै भाव देख्नुपर्छ अर्थात् सबै कुरा भिन्न–भिन्न लाग्छन् तर गहिराईमा जाँदा एउटै भासित हुन जान्छन् भने सात्त्विक ज्ञान हुन्छ ।
यसको विपरीत जुन भिन्नता देखिन्छ, त्यो अलग अलग छ भन्ने लाग्छ भने त्यो राजस ज्ञान हो । र जहाँ केही थाहा नै पाईंदैन, लाग्छ सबै बिना कारण र गडबड भइरहेछ भने त्यो तामस ज्ञान हो ।
ज्ञानको विभाग जस्तै कर्मका पनि विभाग छन् । जहां भोगको इच्छा छ तर राग–द्वेष छैन त्यो कर्म सात्त्विक हो । जहां भोगको इच्छा छ, जहां मैले गर्छु, त्यो अभिमान छ, र यसबाट जहां होहल्ला छ, त्यो राजस कर्म हो । जहां परिणाममा हानि वा हिंसाको, शक्तिको परवाह छैन, र जुन मोहवश गरिएको हुन्छ । त्यो तामस कर्म हो ।
कर्म जस्तै कर्ता पनि तीन प्रकारका हुन्छन् । जसलाई राग हु“दैन अहंकार छैन, तथापि जसमा दृढता छ, साहस छ, र जसलाई असल र खराब फलले हर्ष शोक हुंदैन, त्यो सात्त्विक कर्ता त्यो हो ।
राजस कर्तामा राग हुन्छ । लोभ हुन्छ । हिंसा हुन्छ । हर्ष र शोक त हुन्छ हुन्छ । र फेरि कर्मफलका इच्छाको त झन् के भन्नु ? र तामस– कर्ता अव्यवस्थित, दीर्घसूत्री, हठी, शठ, आलसी, संक्षेपमा संस्काररहित हुन्छ ।
बुद्धि, धृति र सुख पनि यसै गरी भिन्न भिन्न प्रकारका हुन्छन् । यो कुरा पनि जान्नु उचित हुन्छ । सात्त्विक बुद्धिले प्रवृत्ति–निवृत्ति, कार्य–अकार्य, भय–अभय, र बन्ध–मोक्ष आदिको जस्ताको तस्तै सही सही भेद गर्छ र जान्दछ । राजसी बुद्धिले भेद गर्न त खोज्छ तर गलत र विपरीत अनुमान गरिरहेको हुन्छ । र तामसी बुद्धिले धर्मलाई अधर्म मान्दछ । सबै उल्टो नै देख्छ ।
धृति अर्थात् धारणा– जे कुरा पनि ग्रहण गरेर उसमा लागि रहने शक्ति । यो शक्ति अल्पाधिक प्रमाणमा सबैसंग हुन्छ । यदि यो भएन भने जगत एक छिन पनि टिक्न सक्दैन । अब जसमा मन, प्राण र इन्द्रियका क्रियाहरुको समता छ, समानता छ , र एकनिष्ठा छ, त्यहां धृति सात्त्विकी हुन्छ र जसद्वारा मानिस धर्म, काम, र अर्थलाई आसक्तिपूर्वक धारण गर्छ, त्यो धृति राजसी हो । जुन धृतिले मानिसलाई निन्दा, भय, शोक, निराशा, मद आदि छोड्दैन । त्यो तामसी हो ।
सात्त्विक सुख त्यो हो जसमा दुखको अनुभव हुंदैन । आत्मा प्रसन्न रहन्छ । र सुरुमा विषतुल्य लागेपनि परिणाममा अमृततुल्य हुन्छ । विषयभोगमा त्यस्तो हुंदैन । सुरुमा मधुर लाग्छ तर पछि विषतुल्य हुनजान्छ, । त्यसैले त्यो राजस सुख हुन्छ । र केवल मूच्र्छा, आलस्य, निद्राको जुन अवस्था छ, त्यसलाई तामस सुख जान्नु पर्छ । यसरी सबै वस्तुका तीन भाग गर्न सकिन्छ । ब्राह्मणादि चारवर्ण यिनै तीन गुणका अल्पाधिक मात्राले गर्दा नै भएका हुन् । ब्राह्मणका कर्महरुमा शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभव, आस्तिकता हुनुपर्छ ।
क्षत्रियमा शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमा खुट्टा नकमाउनु, दान, राज्य चलाउने शक्ति हुनुपर्छ । खेती, गोरक्षा, र व्यापार वैश्य कर्म हो भने शूद्रको कर्म हो– सेवा । यसको के अर्थ होइन भने एउटाको गुण अर्कोमा हुंदैन, अथवा यी गुणलाई हासिल गर्ने हक अरुलाई छैन । के मात्र हो भने तत् तत् गुणहरुले वा कर्महरुले त्यो त्यो वर्ण चिनिन्छ । यदि हरेक वर्णका गुण कर्म चिन्न सकिन्छ भने परस्पर द्वेषभाव र स्पर्धा पनि रह“ंदैन ।
उचनीच र सानोठूलो भावनाको कुनै गुंजायश छैन । सबैले आआफ्ना स्वभाव अनुसार निष्काम भावले आआफ्ना ती ती कर्म गर्दै, उनीहरु सबै मोक्षका अधिकारी हुन्छन् । त्यसैले के भनिन्छ भने परधर्म जतिसुकै सरल लागे पनि स्वधर्म नै बेश । स्वभावजन्य कर्ममा पाप नहुने संभावना हुन्छ, किनभने उसैमा निष्कामताको पाबन्दी हुनसक्छ । अर्काको कर्म गर्ने इच्छामा नै कामना आउ“छ । बाँकी के भने जस्तो अग्नि मात्रमा धुवाँ हुन्छ, त्यसै गरी कर्ममात्रमा दोष हुन्छ नै । तर सहज प्राप्ति धने कर्मफलको इच्छा बिना हुन्छ । त्यसैले कर्मको दोष लाग्दैन ।
यस प्रकार स्वधर्मको पालन गर्दागर्दै जो शुद्ध हुन्छ । जसको मन वशमा आउँछ । जसले पाँच विषय छोड्यो, जसले रागद्वेषलाई जित्यो । जो एकान्तसेवी अर्थात् अन्तरध्यानी रहन सक्छ । जो अल्पाहार गरेर मन, वचन, कायालाई अंकुशमा राख्छ । ईश्वरको ध्यान जसलाई बराबर रहन्छ । जसले काम, क्रोध, अहंकार, परिग्रह, इत्यादि त्याग गर्यो । त्यो शान्त योगी ब्रह्मभाव प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुन्छ । यस्तो मानिस सबै प्रति समभाव राख्ने हुन्छ । हर्ष, शोक गर्दैन । यस्तो भक्त ईश्वर तत्त्वको यथार्थ जान्दछ । ईश्वरमा लीन हुन्छ । यसप्रकार जसले भगवानको आश्रय लिएको छ । उसले अमृतपद प्राप्त गर्छ । त्यसैले भगवान्ले भन्नु हुन्छ– सबै कुरा मलाई अर्पण गर्दै ममा परायण होउ । र विवेक बुद्धिको आश्रय लिएर ममा चित्त नहट्ने गरी चित्त लगाउ । यसो गर्छौ भने सारा विडम्बनाहरुबाट मुक्त हुनेछौ । तर यदि कसैले अहंकार राखेर मेरो सुन्दैन भने त्यसले विनाशलाई प्राप्त हुनेछ । शय कुराको एक कुरा के हो भने सबै प्रपञ्चलाई त्यागेर मेरो शरण लेउ । अनि पापमुक्त हुन जानेछौ । जो तपस्वी छैन । जो भक्त छैन । जसलाई सुन्ने इच्छा छैन । र जुन मप्रति श्रद्धा राख्दैन । उसलाई यो ज्ञान नसुनाउनु । तर जसले यो गुह्यज्ञान मेरा भक्तलाई दिन्छ । मेरो भक्ति गर्नाले त्यो अवश्य मुक्त हुन्छ ।
अन्तमा संजयले धृतराष्ट्रलाई भन्छन्– जहाँ योगेश्वर कृष्ण छन् । जहां धनुर्धारी पार्थ छन् । त्यहां श्री छ । त्यहां विजय छ । त्यहां वैभव छ । अनि त्यहां अविचल नीति पनि हुन्छ । यहां कृष्णलाई योगेश्वर विशेषण दिइएको छ । यसबाट कृष्णको शाश्वत अर्थ र शुद्ध अनुभव ज्ञान गरिएको छ । र धनुर्धारी पार्थ भनेर के बताइएको छ भने जहां यस्ता अनुभवसिद्ध ज्ञानलाई अनुसरण गर्ने क्रिया छ, त्यहां परमनीति अवरोधिनी मनोकामना सिद्ध हुन्छ । (महात्मा गान्धीको गीता माताबाट)
महाकवि देवकोटाले जीवनको अन्तिम समयमा श्रीकृष्ण उपदेशको महत्त्वलाई निम्नलिखित कवितामा बयान गरेका छन्–
संसार रुपी सुख स्वर्ग भित्र, रमें रमाएं लिइ भित्र चित्र । सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य, रात परे झैं अब बुझ्छु बल्ल । रहेछ संसार निशा समान, आएन ज्यूंदै रहंदा नि ज्ञान । आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो, ज्ञान, न भो विवेक, ।। महामरुमा कण झैं म तातो, जलेर मर्दो बिनु आश लाटो । सुकी रहेको तरु झैं छु खाली, चिताग्नि तापी जल डाम्न फाली । संस्कार आफ्नो सब नै गुमाएं, म शून्यमा शून्य सरी बिलाएं । जन्में म यो स्वर्ग विषे पलाएं, आखिर मै खाक त्यसै बिलाएं ।।
गीता पुष्पिका र यसको भावार्थसम्पादन
संस्कृत ग्रन्थहरुमा अध्याय प्रारम्भ गर्दा अथ अमुक अध्याय तथा अन्त गर्दा इति अमुक अध्याय लेख्ने परम्परा रहेको छ । महाभारतको अध्यायका अन्तमा इति महाभारते अमुक पर्वाणि अमुक अध्यायः भनेर समाप्त गरिएको छ । तर गीतामा केही फरक छ । गीताका प्रत्येक अध्यायको अन्तमा लेखिएको वाक्यलाई पुष्पिका भनिन्छ । यसले त्यो अध्याय समाप्त भएको संकेत गर्छ । पुष्पिकामा गीताका चारवटा शीर्षकका साथै प्रत्येक अध्यायको सार तŒव वा शीर्षक उल्लेख गरिएको हुन्छ । विभिन्न प्रकाशनहरुमा पुष्पिकाको स्वरुप केही फरक पाइन्छ । उदाहरणहरु यस प्रकार छन्
गीताप्रेस गोरखपुरको जयदयाल गोयन्दकाको संकलन, जुन सर्वाधिक प्रचलनमा छ, मा प्रथम अध्यायको पुष्पिका यस प्रकार दिइएको छ – ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। (यस प्रकार श्रमिद्भगवद्गीतोपनिषद्मा ब्ह्मविद्या अन्तर्गतको योगशास्त्रमा श्रीकृष्ण र अर्जुन वार्तालापको अर्जुनविषादयोग नाम गरेको पहिलो अध्याय समाप्त भयो ।) स्वामी ईश्वरानन्दले पनि गीता तात्पर्यमा यसै पुष्पिकालाई प्रयोग गर्नु भएको छ ।
शांकरभाष्य संस्करण र रामकृष्ण मिशन संस्करणसम्पादन
शांकरभाष्य संस्करणहरुमा दिइएको पुष्पिका यस प्रकार छ– इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।।हरि ॐ तत्सत् ।। (यस प्रकार वेदव्यास रचित महाभारतको शतसहस्त्र– एक लाख संहिताको भीष्म पर्वमा श्रमिद्भगवद्गीतारुपी उपनिषद्मा ब्ह्मविद्या अन्तर्गतको योगशास्त्रमा श्रीकृष्ण र अर्जुन वार्तालापमध्ये अर्जुन विषाद योग नाम गरेको पहिलो अध्याय समाप्त भयो ।) रामकृष्ण मिशनको स्वामी अपूर्वानन्दले गरेको अनुवादमा यस पुष्पिकालाई प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालीको उपलब्ध पहिलो अनुवाद कोमल गीता मानिन्छ । यसमा दिइएको पुष्पिका निम्न्लिखित छ– इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ।।
पुष्पिकाको हरेक शब्द महत्त्वपूर्ण छ । ॐ ज्ञानको, वेदको आधार हो । तत्सदिति भने पछि आफुले ईश्वर समर्पणका लागि गरेको हरेक कृत्यमा रहेको कमी पूरा हुन्छ । विधिपूर्वक गरिएको कृत्य छ भने त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ । यो कुरा गीताको अध्याय १७ को २३ औ श्लोकमा स्पष्ट रुपमा बताइएको छ । स्वयं श्रीभगवान्को मुखबाट निस्केको हुनाले भगवद्गीता भयो । यस ग्रन्थमा सारा उपनिषदको सार छ त्यसैले यो उपनिषद् पनि हो । ईश्वरीय तत्त्वको साक्षात्कार गराउने हुनाले यो ब्रह्म विद्या हो । यसको प्रत्येक अध्याय ईश्वरसंग योग गराउने विधिसंग सम्बन्धित छ ।
यो मुख्यतः कृष्ण र अर्जुनको कुराकानी भएर नै शास्त्ररुपमा निःसृत भएको हो, त्यसैले कृष्णार्जुन संवाद पनि हो । प्रत्येक अध्यायले गीताको मनन गर्नेलाई ईश्वरको तत्वसंग जोड्छ । त्यसैले प्रत्येक अध्याय एक योग हो । पहिलो अध्याय विषाद योग हो अर्थात् यसले अर्जुनको डिप्रेशनको बारेमा बताउ“छ । ईश्वरसंग योग हुनाको लागि यो एक प्राथमिक शर्त हो । विषाद नभइ ईश्वरको अनुभव हुंदैन ।
पुष्पिकामा गीताका चार नामहरु यस प्रकार बताइएको छ, गीता, सु उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, कृष्णार्जुन संवाद । अर्जुन भनेको सेतो कृष्ण भनेको कालो तर अर्जुनको एक नाम कृष्ण पनि हो । त्यसैले सेतो र कालो एक अर्थमा एउटै पनि हो । सेतोले सबै रंग परावर्तित गर्छ भने कालोले सबै रंग शोषण गर्छ । यो दुवैको संवाद अर्थात् सेतो र कालो दुइको ठीक त्यस्तो संगम हो जसरी सेती गण्डकी र काली गण्डकीको संगम स्थल उत्तम तीर्थ बनेको हुन्छ । गीतोपनिषद् पनि त्यस्तै पवित्र तीर्थ हो । जहाँ डुबुल्की मार्नेहरुको सबै अज्ञान नाश हुन्छ । गंगा स्नानभन्दा पनि गीता स्नान अझ पवित्र किन पनि छ भने गंगाको गहिराईमा पुग्दा अपठ्यारो अनुभव हुन्छ । तर गीताको जति गहिराईमा गयो उति बढी आनन्द हुन्छ । ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः
योगदान गर्ने प्रयोगकर्तासम्पादन
श्रीमद्भगवद्गीतामा आफ्नो अमुल्य योगदान दिने प्रयोगकर्ताहरू यस प्रकार छन् ।
बाबु राम ज्ञवाली - पहिलो अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - दोस्रो अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - तृतीय अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - चौथो अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली -5औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली -6औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली -7औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 8 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली -9औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 10 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 11 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 12 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 13 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 14 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 15 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 16 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 17 औ अध्याय
बाबु राम ज्ञवाली - 18 औ अध्याय
"https://ne.wikibooks.org/w/index.php?title=श्रीमद्भगवद्गीता&oldid=8011" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २१ मार्च २०१६, १६:४४
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:४४, २१ मार्च २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।